पाच रूपैयामा सम्बन्ध विच्छेद
म्याग्दी । म्याग्दी जिल्लाको रुकुम गाविसमा पाच रूपैयामा सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । पतिपत्नीबीच सजिलैसाग पारपाचुके भएको घटनाहरू धेरै कममात्रामा सुन्नमा आउछन् । मुद्दा मामिला झैझगडा नाना थरी लठाराहरू पार गरेर भनेजति पैसा दिएर चित्त बुझाएरमात्र सम्वन्ध बिच्छेद हुने गरेका घटना सुन्नमा आउाछन् । सम्बन्ध विच्छेदका लागि दश लाखभन्दा धेरै रकम दिएर सम्वन्ध बिच्छेदको खबर पनि सुनिएको हो । तर पााच रूपयामा सम्बन्ध बिच्छेद भयो भन्ने सुनिएको थिएन । म्याग्दी ओखरबोट- ९ पानीखानीकी खड्गबहादुर पुनकी १५ वषर्ीया भुमित्रा पुन र रुकुम डाडागाउाका जगत पुनका १७ वषर्ीय छोरा रूपेश पुनले ५ रूपैयामा सम्वन्ध विच्छेद गरेका छन् । भुमित्रा पुन र रूपेश पुनले गत ०६७ साल मंसिर १४ गते प्रेम विबाह गरेका थिए । फरक-फरक विद्यालयको कक्षा ९ र ८ मा अध्ययन गर्ने रूपेश र भुमित्राबीच पे्रमपत्रकै माध्यमबाट प्रेम सम्बन्ध गासिएर बिबाह बन्धनमा बााधिएका थिए । विवाह पश्चात भुमित्रालाईर् माइतीपक्षले घरमै राखेर अध्ययन गराएको पतिको घरमा नपठाएको भन्दै केटा पक्षले सम्बन्ध विच्छेद गरेका हुन् । गत शुक्रबार गाविस भवनमा स्थानीय गााउलेको एक भेलाकाबीच रूपेशले भुमित्राको हातमा पाच रूपैया थमाई दिएपछि स्थानीय परम्परा र संस्कार अनुसार उनीहरूको व्यवहारिक रूपमा नै सम्वन्ध विच्छेद भएको हो । स्थानीय बुद्धिजीवीहरूका अनुसार गाउाको सामान्य घटना भएका कारण कानुनी रूपमा नभई व्यवहारिक रूपमा सम्बन्ध विच्छेद गरेका हुन् । तर यसरी ५ रूपैयामा सम्वन्ध विच्छेद गरिएको घटनाले जिल्लावासीमा निकै चासो जगाएको छ ।
ढुङ्गा निर्जीव हो भन्नेमा दुईमत छैन । अब निर्जीव मानिएको यस्तो वस्तु आफाै हिड्न थालेपछि भने सर्वसाधरण मात्र हैन, वैज्ञानिकहरु पनि हैरान भएका छन् । विषम वातावरणीय परिस्थितिका कारण मानिस नबस्ने अमेरिकाको ‘डेथ भ्याली’ मा यस्तै घसि्रएर आफै हिड्ने कैयौ ढुङ्गाहरु फेला परेका छन् । समथर भूमिमा ती ढुङ्गाहरुले बनाएको गोरेटो बाटोहरु पनि प्रष्ट देख्न सकिन्छ । गि्रष्ममा सुख्खा अनि अलिअलि हिलो हुने र हिउादमा हिाउले छोपिने उक्त उपत्यकाकोे अनुसन्धानका लागि भूगर्भशास्त्रीहरुको एक समूह त्यहा पुगिसकेको छ ।
विगत एक दशकदेखि भइरहेको ढुङ्गाको चालले प्रकृतिको अर्को रहस्य बाहिर ल्याएको बताउाछन् अनुसन्धानमा संलग्न भूगर्भशास्त्रीहरु । जसमध्ये केही भन्छन्- ‘समथर भूभागमा माटो अलि नरम हुादा र हल्का हिाउ परेपछि ढुङ्गा हिड्ने गर्छ ।’ तर अर्का थरी भूगर्भविद्हरु भने यस्तो निष्कर्षमा सहमत छैनन । गि्रष्म याममा ढुङ्गा नै सुक्न तातो तापक्रममा ढुङ्गा घस्रने हुादा हिलोले चिप्ल्याएको हुन सक्ने सम्भावनालाई उनीहरुले अस्वीकार गरेका छन् । त्यसमाथि ढुङ्गाले सानो खाडल नै बनाएर अगाडि गतिशिल भएको भू-दृश्य यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने ढुङ्गाहरु एक अर्कासाग समानान्तर भएर अघि बढेको पाइन्छ ।
वर्षबित्दै जाादा ती ढुङ्गाहरुले पनि आˆनो बाटो परिवर्तन गर्ने गरेको भूगर्भशास्त्रीहरुले पत्ता लगाएका छन् । केहिले रेखीय र अन्यले अण्डाकार, बाङ्गोटिङ्गो ट्रयाकहरु बनाएको देखिन्छ । यद्यपी कसैले पनि अहिलेसम्म नाङ्गो आाखाले हिाडेको नदेखेको र यसको गति’bout थाहा नपाएको बताएका छन् । २ देखि ५ वर्षको अवधिमा केहि ढुङ्गाभन्दा अन्य ढुङ्गाले बढी नै दुरी तय गरेको भूगर्भशास्त्रीले बताएका छन् । ढुङ्गा कसरी हिड्यो अनि ट्रयाकहरु कसरी बने, यो अझै रहस्य नै छ ।
चुम्कीय शक्तिका बालक
श्मानिसको शरीरमा चुम्बकीय शक्ति हुन्छ द्दन्दा धेरैलाई पत्याउन गाह्रो छ । हुनत मानिसको शरीरमा करेन्ट उत्पन्न भएको घटनाहरु पनि प्रकाशमा आएका थिए । क्रोसियाका एक ६ वर्ष बालकको शरीरमा चुम्बकीय शक्ति भएको समाचारले विश्वलाई तीनछक्क बनाइदिएको छ ।
इभान स्टोल्जकोभिक नामका बालकको शरीरमा चुम्बकीय शक्ति भएकै कारण उनको शरीरमा किचनका चच्चा, काटा, प|mाइङ प्यान, मोबाइल, चक्कुलगायत अन्य धातुका घरेलु सरसामान टासिने गरेको परिवार स्रोतलाई उधृत गर्दै बेलाईती पत्रिका मिररले जनाएको छ । बालकको छातीमा २५ किलो वजनसम्म धातुहरु टासिने थाहा भएको छ । यति मात्र हैन, इभानको हातमा हिलिङ पावर -रोग निको पार्ने क्षमता) समेत रहेको परिवारको दाबी छ । एक पटक हजुरबुबाको पेट दुखेको र पछि इभानले आˆनो हात उहाको पेटमा राख्दा तातो भई निको भएको परिवारका सदस्यहरुको दावी छ । चमत्कारी यी बालकले संसारका धेरै वैज्ञानिकहरुको ध्यान आफूतिर खिच्न सफल भएका छन् । रहस्य र चमत्कारै चमत्कारले भरिपूर्ण यो ब्रम्हाण्डमा इभान अहिले वैज्ञानिक अनुसन्धानको विषय बनेका छन् ।
१ अर्बकी मालिक्नी बनिन नोकर्नी ?
हरेक आमालाई आˆनो सन्तानभन्दा प्यारो अरु केही हुन्न । त्यहि सन्तान प्रेममा चुर्लम्म डुबेर छोराछोरीलाई जे गर्न पनि तयार हुन्छन् संसारका आमाहरु । आमाको मन न हो, आˆनो पेट आधा राखेरै भए पनि बच्चालाई भोको राख्दैनन । तर आजभोलि थोरै प्रतिसत युवापिढी आमाबुबाको बुढेसकालमा सहाराको लठ्ठी बन्ने गरेका छन् । छोरा या छोरी नै कुपुत्र/कुपुत्री भएपछि कसको के लाग्छ र ? यस्तै नालायक छोराबाट पीडित बनेकी छिन् भारतकी एक करोडपति महिला । जो अहिले छोराले घरबाट निस्कासित गरेपछि अर्काको घरमा भाडा माझ्दै, सरसफाइ गर्दै नोकर्नीको जीवन बिताइरहेकी छिन् ।
१०९ करोडका मालिक रोहित देसाइकी श्रीमती हंसाबेनको जीवन अहिले छोराको कुकृत्यले गर्दा नर्कबनेको छ । विगतको त्यो उल्लासमय, खुसीको पलहरु सम्झदा आाखा रसाउने बताउाछिन् उनी । आाखा नरसाओस पनि कसरी ? एकै आदेशमा ’round नोकरचाकरको उपस्थिति हुन्थ्यो । नपुग केही थिएन । परिवारमा सुख र शान्ति थियो । तर श्रीमानको असामयिक निधनले उनको सिउादो मात्र पुछिएन, जीवन नै जिउादो लास बन्न पुग्यो । छोरा संदीपले सुरुमा फकाइफुल्याई सम्पत्ति सबै आˆनोमा नामसारी गरी घरबाट गलहत्याई निकालेको पल सम्झदै धुरुधुरु रुन्छिन् यी दुःखी आमा । बेघर भएपछि हातमुख जोड्न अरुको घरमा काम गर्न बाध्य भएको उनले बताइन ।
केही चिनजानका आफन्तहरुको सल्लाहमा हंसाबेलले छोराविरुद्ध ˆयामिली कोर्टमा पनि मुद्दा दायर गरिन । आमामाथि अन्याय भएको ठहर गर्दै अदालतले हंसाबेलको भरणपोषण खर्चदिन संदीपलाई आदेश पनि दियो । तर संदिपले अदालतको निर्णयलाई पनि लत्याइ दिए । पछि आˆनो श्रीमानको साथी नानुभाईले घरमा बास, गास मात्र दिएनन, न्यानो माया अनि सम्मान दिएको हंसाबेलले बताइन । यो पनि असहृय भयो छोरालाई । संदिपले एक दिन घरमै गई नानुभाईलाई निकै गाली गलौज पनि गरे । ठूला हृदयवान नानुभाईले हंसबेलाई कुनै शिकायत गरेका थिएनन । यद्यपी श्रीमानको साथीको घरमा अशान्ति नहोस भनेर त्यहााबाट उनी आफै बाहिरिन । संदिपले समाज र कानुनको डरले आमालाई भरणपोषण रकम त देलान । के यसले आमाको त्यो दुखेको मनको घाउ मेटाउला त ?
६० करोड बालबालिका फेसबुक प्रयोगकर्ता
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क जुकरबर्गले यस्ता सञ्जालहरु १३ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पनि प्रयोग गर्नछुट दिनुपर्ने बताएका छन् । यो अमेरिकाको संघीय कानुनको विपरीत हुनेछ । सन् १९९८ मा बनेको यस्तो कानुनले बालबालिकाको अनलाईन गोपनियताको पक्षमा वकालत गर्छ ।
यसका लागि जुकरबर्गले आफू कानुन परिवर्तनका लागि लड्न पनि तयार रहेको बताए । बालबालिकालाई यस्तो सञ्जाल प्रयोग गर्न अधिकार दिलाउने मामलामा संघर्ष गर्न कुनै अपराध होइन भन्दै उनले भनेका छन्, ‘यस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट उनीहरुलाई पुग्ने शैक्षिक उपलब्धी धेरै छन् ।’ ‘मेरो व्यक्तिगत मान्यताअनुसार ज्ञान आर्जण गर्नका लागि कुनै पनि उमेरको हदबन्दी हुनुहुादैन । यसका लागि सानै उमेरबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनी अड्चनका कारण हामीले यस्तो प्रकारको ज्ञान आर्ज गर्ने प्रक्रियालाई अवरोध गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
उनी क्यालिफोर्नियाको एउटा स्कुलमा आयोजना गरिएको नवीनतम खोजसम्बन्धी सम्मेलनमा बोल्दै नयाा शैक्षिक विधिको सिर्जनामा लागिपर्नु आˆनो सबैभन्दा ठूलो चाहना रहेको बताए । फेसबुकका लागि बालबालिकाको कुन उमेर सबैभन्दा सानो भन्नेमा अझै पनि बहस गर्न बााकी नै रहेको उनले बताए ।
आलोचकहरुले भने बालबालिकाको गोपनियता र अनलाईनबाट हुने विभिन्न प्रकारका अन्य खराब गतिविधिका कारण उमेरको सीमिततामा विचार गर्नुपर्ने बताउाछन् । फेसबुकका प्रवक्ताले भने आˆनो सामाजिक सञ्जालमा सबै उमेर समूहका प्रयोगकर्ताको गोपनियताको रक्षाका हदैसम्मका उपायहरु अपनाइएको बताए । तर हालै गरिएको एक अध्ययनले यस्ता सञ्जालको प्रयोगमा उमेरको हदबन्दी लागू गर्न कतिसम्म अप्ठयारो हुनसक्छ भन्ने देखाएको छ । यसका लागि बालबालिकाले आˆनो उमेर झूठो पनि भन्न सक्छन् । यसको रोकथामका लागि कुनै एउटा मात्रै समाधान छैन ।
विभिन्न कानुनी प्रावाानहरुका बाबजुद पनि अमेरिकाको उपभोक्ता प्रतिवेदनका अनुसार १३ वर्षमुनिका फेसबुक प्रयोगकर्ता बालबालिकाको संख्या हाल ६० करोड छ ।
रुख बिरुवाको के कति महत्व र आवश्यक छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तर यही धरतीमा भएका अनौठो र उपयोगी गुणकारी रुख हालसम्म पनि आम मानिसले उपयोग गर्दै आइरहेका छन् । त्यसमध्येमा पनि आश्चर्यलाग्दो अनौठो रुख पनि छन्, जुन हाम्रो कल्पनाको संसारबाट टाढाको कुरा हुन सक्छ । यस्तै अनौठो रुखको ’boutमा यहाा चर्चा गर्दैछु । १. सर्वत दिने रुखः अस्ट्रेलियाको क्विसल्यान्ड सहरमा एउटा विशाल रुख छ, जसको आकार बोतल जस्तै छ । यसको उचाई १५ मिटर र फेदको मोटाइ ८ मिटर छ । यस रुखको फेदमा काटेर हेर्ने हो भने यसबाट सर्वत जस्तै मीठो र स्वादिष्ट रस निस्कन्छ ।
२. दूध दिने रुखः दक्षिण अमेरिकामा पाइने भेनेजुएला म्याजिक टि्र -जादूको रुख) नामक रुखले गाई भैंसीको जस्तै दूध दिने गर्छ । यस रुखलाई दिनमा दुई पटकसम्म दुहिने गरिन्छ । साना-साना हाागालाई थोरै थोरै काट्दा त्यहाबाट दूधजस्तो थोपा निस्कन्छ जसलाई तताएर खाादा गाई भैंसीको दूधजस्तै पोषिलो मिठास हुन्छ । यस्तै ब्राजिलको घना जंगलमा ‘काउ टि्र’ नामक रुख पाइन्छ । यसको हाागामा प्वाल पार्दा गाई भैंसीको जस्तै पौष्टिक दूध निस्कन थाल्छ । त्यस्तो दूधलाई जङ्गलवासी भाडामा जम्मा गरेर मजासाग पिउने गर्दछ । ब्राजिलवासी यस्तो दूधमा एक प्रकारको जङ्गली औषधि प्रयोग गरेर धेरै दिनसम्म सुरक्षित राख्छन् अनि आफूलाई खााचो परेको बेलामा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउाछन् ।
३. पङखा वाला रुखः एसियामा पाइने एकप्रकारको सानो खाले रुखलाई टेलिग्राफ टि्र भनिन्छ । किनकि यसका पातहरु बिल्कुलै हावा नचलेको बेलामा पनि ˆयाट-ˆयाट गरी फर्काइरहन्छन् । मानौं यिनले पङखा हल्लाइरहेका छन् । मानिस यस रुख मुनि बसेर शीतलता लिने गर्दछ ।
४. उज्यालो दिने रुखः चीनको हुनान प्रान्तमा पाइएको एक रुखको प्रत्येक हाागाबिङ्गाबाट उज्यालो प्रस्फुटित हुन्छ । यो रुखको एक टुक्रा बोक्रा मात्र पनि कोठामा राखियो भने प्रकाशमय हुन्छ । कुन कारणले गर्दा यो रुखबाट प्रकाश आउाछ ? भन्ने कुरा आजसम्म पनि वैज्ञानिकले पत्ता लगाउन सकेका छैन । यस्तै ‘सोम औषधि’ नामक यो रुख हिमालको आसपासमा पाइन्छ, जसले रेडियमको जस्तो उज्यालो प्रकाश दिन्छ । यस रुखमा शुक्ल पक्ष शुरु भएपछि प्रत्येक दिन एक-एक वटा पात थपि्रदै जान्छन् । पूणिर्माको दिनसम्ममा थपिएका पातको सख्या १५ पुग्छ । यसरी नै कृष्णपक्ष सुरु भएपछि प्रत्येक दिन एउटा पात झर्दै जान्छ र औंसीको दिनसम्ममा त्यस रुखमा एउटा पनि पात रहादैनन ।
५. मानवरुपी रुने रुखः अपि|mकी देशहरुमा पाइने ‘सेराङ्क’ नामक रुखको बनावट मानिससाग मिल्दछ । यस रुखको अर्को विशेषता के छ भने यसलाई काट्दा वा उखेल्दा मानिसले जस्तै आवाज निकालेर रुने गर्दछ । यस्तै केनरी द्वीपमा पाइने ‘लाउरे मण्डक’ रुख टाढाबाट हेर्दा मान्छे जस्तो देखिन्छ । यसलाई काट्न वा उखेल्न खोज्दा बालक रोए झैं रोएको आवाज आउाछ । यस्तै अमेरिकाको मिसिगन प्रान्तको आलो क्लार्कनामक व्यक्तिको बगैंचामा एक यस्तो रुख छ, जुन झट्ट हेर्दा मानिसको आकृतिसाग ठ्याक्कै मिल्दछ । यस रुखमा मानिसको जस्तै हात, खुट्टा, टाउको छ । त्यति मात्र होइन टाउकोमा टोपी पनि लगाएको जस्तो देखिन्छ भने दाहिने हातमा सानो छडी पनि लिए जस्तो देखिन्छ ।
६. पातबिनाको रुखः वनस्पतिले पातबाट सास फेर्छ यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर प्रकृतिमा एउटा यस्तो पनि रुख हुन्छ, जसमा एउटा पनि पात हुादैन । अंग्रेजीमा रस्को एक्युलेट्स भनेर चिनिने एकप्रकारको वनस्पतिमा पात हुादैनन । तर यसका हाागाहरु नै पातको आकारमा बनेका हुन्छन् । यसमा फूल पनि यिनै पातजस्तो बनेका शाखाका बीचबाट निस्कन्छ ।
७. सियो धागोयुक्त रुखः जंगलमा घुम्दाघुम्दै कतै आफूले लगाएको लुगा उभ्रे अथवा च्यातिए भने आफूसाग सियो धागो नहुादा ‘सेन्चुरी प्लान्ट’ नामक रुख भेटिएमा लुगा सहजै सिउन सकिन्छ । यसको रुखका हागा मोटा खाले पात गुछाका रुपमा हुन्छन् । पातका टुप्पा सियोजस्तै तिखा र कडा हुन्छन् । कुनै पातलाई फेदैमा पट्याक्क भाचेर टुप्पो भएको ठाउाभन्दा तल एउटा ढुङ्गाले किच्ने बित्तिकै पातमा रहेको दरिलो मोटो भाग पक्लक्क उकिन्छ र टुप्पो जस्ताको तस्तै रहन्छ तर टुप्पसाग गासिएर भित्रि रहेको धागो यथावत रहन्छ र त्यसैले लुगा सिउन मिल्छ ।
८. मैनबत्ती दिने रुखः दक्षिण अपि|mकामा एउटा यस्तो रुख पाइन्छ, जसले मैनबत्तीको काम गर्दछ । यो रुखको हाागाबाट १.५ मिटर जति लामो सलाईको जस्तै मोटो कााटी निस्किएको हुन्छ । त्यो देख्दा मैनबत्ती जस्तो देखिने मात्र नभएर मैनबत्ती जस्तै बल्ने काम पनि गर्दछ । यस्तै मध्य अष्ट्रेलियामा पाइने एकप्रकारको वनस्पतिमा जुन फूल फुल्दछ, त्यो हेर्दा मैनबत्ती जस्तै हुन्छ । त्यसैलेलाई अंग्रेजीमा क्यान्डिल स्टिक्स अफ द सन भनिन्छ । तर यो फूल एक बोटमा सात वर्षमा एकपल्ट मात्र निस्कन्छ ।
९. अन्धो पार्ने रुखः एब्सिनियामा पाइने अस्कलेपियास नामक रुखको पातबाट निरन्तर दूध जस्तो एकप्रकारको सेतो झोल बगिरहन्छ । यो झोल आाखामा अलिकति मात्र परे पनि मानिस अन्धो हुन्छ । यो रुखको दाउरा चिर्दा दाउरा छोएको हातले आाखा मिच्यो भने पनि मानिस अन्धो हुन सक्छ । यस्तै वेस्ट इन्डियनमा पाइने ‘मान्चिनील’ भन्ने रुख पनि साह्रै डरलाग्दो हुन्छ । यसको रसको सम्पर्कमा आउने अन्धा हुन्छन् र यस रुखको छहारीमा रातभरी सुत्ने मानिस मरेका पनि छन् ।
१०. कपडा दिने रुखः न्युजिल्यान्डमा पाइने ‘लेस वार्क टि्रर’ नामक रुखबाट कपडा प्राप्त गर्नसकिन्छ । १० मिटरसम्मको उचाई हुने यो रुख सधा हरियो भइरहन्छ । यस रुखको सानो हाागो काट्ने बित्तिकै त्यसको भित्रबाट सेतो जालीदार बनेको कपडा जस्तो सुत्ला निस्कन्छ । यदि ठूलो हाागा काटेमा दरिलो जालीदार कपडाको रास नै निस्कन्छ । त्यहााका जङ्गलमा बस्ने आदिवासी त्यही जालीदार कपडाबाट दरी, झोला, मजेत्रा आदि बनाएर प्रयोगमा ल्याउाछन् ।
११. सङ्गीत उत्पन्न गर्ने रुखः लाल सागरदेखि नील नदीसम्म फैलिएको क्षेत्र नुबियामा सोफर नामको सङ्गीतमय रुख पाइन्छ । यो रुखको हाागामा पोका-पोका निस्कन्छ । ती पोकामा कीराले स-साना प्वाल पार्छ र सोही प्वालमा हावा छिर्दा सुरिलो सुसेली सुनिन्छ । यस्तै जमैकामा बतास चल्दा चराले गाएजस्तो सुसेल्ने रुख पाइन्छ । त्यहााका बासिन्दा उक्त रुखलाई बोक्सी रुख भन्ने गर्दछन भने पूजाआजा पनि गर्छन् । त्यो रुख अध्यारोमा रहस्यमय ढङ्गले चम्कन्छ पनि ।
१२. घिउ दिने रुखः अमेरिकामा पाइने विपिङ फर नामक रुखले मैनबत्ती आकारको फल फल्छ । यो फल ४ फिटसम्म लामो हुने गर्दछ । यसलाई पेलेर घिउ निकालिन्छ । गाईलाई ख्वाउादा मोटाउाछ । यस्तै नेपालमा पनि च्युरी नामक रुखको फलको बियाा पेलेर घिउ निकालिन्छ । यो घिउ, औषधि बनाउन, शरीरमा घस्न, बत्ती बाल्न र साबुन बनाउन प्रयोग हुन्छ ।
१३. कीरा फट्यााग्रा खाने रुखः अमेरिकामा एउटा अचम्मको रुख पाइन्छ, जसले अरु साधारण रुख झैं माटोबाट आहार प्राप्त नगरी कीरा फट्याग्रा खाएर बाच्ने गर्छ। तसर्थयसको नाम पनि कामअनुसार ‘कोबरा’ वृक्ष राखिएको छ ।
१४. कुरा गर्न रुखः ‘डेसियोडियम ड्राइक्वेट’ नामक रुखका पातबाट गर्मीको याममा मानिसले कुरा गरेझैं आवाज निस्कन्छ । त्यसका बासिन्दाले यस रुखलाई कुरा गर्ने रुख भन्ने गरिन्छ ।
१५. मांसाहारी रुखः अपि|mकी महाद्वीप तथा मेडागास्कर द्वीपको घना जङ्गलमा यस्ता रुख पाइन्छन्, जसले मान्छे तथा जनावर मारेर खान्छन् । यस्ता रुखको उचाइा २५ फिटसम्म हुन्छ । यस्ता रुखको शाखा हाागाको अगाडिको भागमा ठूलाठूला थालका आकारका फूल हुन्छन् । यिनै हाागामा १-२ फिट लामो नङ्ग्ररा जस्ता तिखा कााटा हुन्छन् । असावधानीवश कुनै मानिस वा जनावर ती रुखको छेउमा पुगे भने ती कााटाले छेड्छन्, छेडेपछि शरीरबाट बगेको रगतलाई ती कााटाले सोसेर निल्दछन् । जब ती प्राणीको शरीरबाट रगत आउन छोड्छ तब कााटाले छोडिदिन्छन् । रगत खाएको बेला रुखमा रहेका फूल अझ ठूला हुन्छन्, केही दिन पछि फेरि साविककै आकारमा आउाछन् ।
१६. गोली जस्तै पडि्कने रुखः मेक्सिकोमा एक किसिमको रुख पाइन्छ । जसमा फलेका फल पाकेपछि खुबै जोडसाग फुट्दछ । फुटेका फलका टक्राले २० फिटको घेराभित्र बसेका मानिसलाई घाइते पार्नसक्छ ।
१७. हिाड्ने रुखः अमेरिकामा पाइने ‘मेलग्रोव’ नामक रुख सयौं मिटर अग्लो हुन्छ जुन ज्यादै मन्दगतिमा हजारौं फीट पर पुग्ने गर्दछ । त्यस्तै ‘टम्पवल पिङ्स’ नामक बिरुवा खास गरेर मरुभूमिको नजिक पाइन्छ । यसले आˆनो जरामा रहेको पानी खाइसकेपछि आफैा नै जरा बाहिर निकाल्छ र हुरी बतास चल्दा सो सागसागै धेरै टाढा नदी वा महासागरमा पुगी पानी खाई पुनः जरा गाड्छ ।
१८. बषर्ा गराउने -पानी पार्ने) रुखः क्षेत्रमा पाइने एउटा रुखलाई ‘समानी समन’ भनिन्छ । यसलाई बषर्ा गराउने रुखका रुपमा चिनिन्छ । यसले दिनमा आˆनो कोसाहरुमा पानी जम्मा गर्दछ र उक्त जम्मा गरिएको पानी रातमा घना बषर्ा जस्तै गरी बर्साउाछ ।
१९. एकपाखे रुखः ओरेगनमा कोलम्बिया नदी घााटीका किनारमा उमि्रएका रुख सदैव एकपाखे -एकातिरमात्र सोहोरिएका) हुन्छन् । यी रुखले लगातार एकै दिशाबाट आउने यति भीषण हावाको सामना गरिरहनुपर्दछ कि यिनका सम्पूर्ण हागा हावाको बहावको दिशामा नै बढ्छन् । यसैकारण रुख एकपाखे बन्न जान्छन् ।
२०. हात्ती दााते रुखः पश्चिमी मध्य अमेरिकामा एक किसिमको रुखमा निकै ठूला फल फल्छन् । यस्ता फललाई सुकाएर टाक आदि बनाउने काममा प्रयोग गरिन्छ । झट्ट हेर्दा यस्ता फलबाट बनेका कुनै पनि चीज हात्तीको दाातबाटै बनाइएका जस्ता देखिन्छन् ।
२१. तेल दिने रुखः ब्राजिलमा पाइएको ‘कोपिबिया’ नामक रुखबाट वर्षमा दुई पटक तेल झिक्न सकिन्छ । एक पटकमा झिकेको तेल २५ लिटरसम्म हुन्छ । यसलाई तत्कालै गाडीमा हाली प्रयोग गर्नसकिन्छ ।
२२. तुरुन्त घाउ ढाक्ने चोपवाला रुखः मेवाको फलमा बाहिरबाट पातलो चिरा लगाएर चोप निकाल्न सकिन्छ । तर यो चोपमा एउटा विचित्रको गुण हुन्छ । यहि गुणका कारण नै यो चोप हावाको सम्पर्कमा आउनसाथ तुरुन्त जम्दछ र चिरिएको घाउको मुख बन्द गरिदिन्छ । यसबाट चोप निस्कन पनि तुरुन्त रोकिन्छ ।
२३. सम्पूर्णमसलाको एउटै रुखः एउटा रुख जसको नाम नै यसको गुणको आधारमा ‘सम्पूर्णमसला’ राखिएको छ । किनकि यसको फलमा ल्वाङ, तेजपात, दालचिनीको एकमुष्ट स्वाद र सुगन्ध पाउन सकिन्छ ।
२४. साबुन दिने रुखः उत्तर अमेरिकामा पाइने साबुन रुख पनि अति उपयोगी रुख मानिन्छ । बर्सेनि यो रुखमा सुपारी जत्रो फल फल्छ । फलभित्र नरम गुदी हुन्छ । गुदीको आधाभाग बसाउने साबुन हुन्छ, जसबाट राम्ररी फिाज निस्कन्छ, सो भेगका मानिस यसैबाट लुगा धुने गर्छ ।
२५. पेटिकोट पाम रुखः क्यालिफोर्नियामा पाइने ‘वासिङ्गटोनिया पाम’ नामक रुखलाई पेटिकोट पाम पनि भन्न सकिन्छ । यसका पातले यसको बोटलाई अनौठो तरिकाले ढाकेर सूर्यको किरणबाट जोगाउाछन् । झ्वाट्ट हेर्दा त्यहाा एक महिलाले आˆनो शरीरलाई पेटिकोटद्वारा ढाकेको जस्तो देखिन्छ ।
२६. नुन दिने रुखः चीनको हिलोग जियाङ्ग र जीलीन प्रान्तमा पाइने एक किसिमको रुखबाट एक प्रकारको पाउडर निस्कन्छ । यो पाउडरबाट नुनको काम लिन सकिन्छ ।
२७. अचम्मको धोत्रे रुखः अपि|mकामा पाइने ‘एण्डुसोनिया डिजीटोटा’ नामक रुख ज्यादै आश्चर्यलाग्दो छ, जसको जराको गहिराई सय मिटर तलसम्म गाडिएको हुन्छ । यसका हाागा खोक्रो हुन्छन् र सो भागमा पानी भरेर राख्न सकिन्छ । एउटा रुखमा पााच हजार लिटरसम्म पानी अटाउाछ । यही पानी रेगिस्तानका यात्रीलाई बेच्ने गरिन्छ । साथै यसका हाागामा ठूला-ठूला प्वाल पारेर मरेको मानिसको शव राख्ने चलन पनि छ । यसमा राखेको शव कुनै औषधि विना नै जस्ताको तस्तै सयौं वर्षसम्म रहन्छ ।
इङ्गेजमेन्टको २८ वर्षपछि बिहे
सामान्यतया इङ्गेजमेन्ट भएको कति समयपछि जोडीले विहे गर्छन् ? एक महिना, १ वर्ष वा १ दशक ? धेरैलाई लाग्ला कि यो समयावधि बढी भयो । तर संसारमा यस्ता जोडीहरु पनि छन् जो बिहेभन्दा प्रेमलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् । बेलाईतका इवान ब्राउन र बारबरा फर्लागरले इङ्गेजमेन्ट भएको झण्डै ३ दशक अर्थात २८ वर्षपछि बिहे गरेका छन् ।
एकै अस्पतालमा कार्यरत ब्राउन -६३) र फर्लागर -५५) को पहिलो भेट १९८१ मा भएको थियो । सागै काम गर्दा, बोल्दा कहिले प्रेम भयो उनीहरुलाई पत्तो नै भएन । बिहे गर्ने निर्णयपछि दुबैले इङ्गेजमेन्ट पनि गरे । यद्यपी बिहेको मण्डपमा लगनगााठो कस्न उनीहरुले निकै लामो समय कुर्नुपर्‍यो । आखिर उनीहरुको जीवनमा यस्तो के भयो, जसको कारण बिहे नै ढिलो गर्नु पर्‍यो ? यसको पछाडि कुनै ठुलो कारण थिएन । आ-आˆनो काममा ब्यस्त भएकै कारण ब्राउन र फर्लागरलाई बिहे गर्ने फुर्सद नै थिएन रे । एकअर्काप्रति राम्रो समझदारी र भरोसा भएकै कारण बिहे बाधक नबनेको उनीहरुले बताए । औपचारिकरुपमा बिहे हुनु अगाबै पती-पत्नीको रुपमा सागै बसेको भने उनीहरुले स्वीकारे । अचम्मको कुरा के छ भने ब्राउन र फर्लागरलाई कामबाट निवृत भएपछि मात्र बिहे गर्ने फुर्सद मिलेको छ । अन्ततः जोडीले बुढेसकालमा भए पनि बिहे गरेरै छोडे ।
फूल दिने प्रेमी धोकेबाज
धेरै प्रेमी र प्रेमिकाबीच आˆनो माया सााचो देखाउने होड नै चल्छ । यस क्रममा उनीहरु विभिन्न उपहारहरु आदनप्रदान गर्छ, ताकी आˆनो व्याइप|mेन्ड वा गर्लप|mेन्डमा खुसीको वषर्ात होस् । तर कोही प्रेमीले बारम्बार फूल उपहार दिने गरेको छ भने चाहिं युवतीहरु अलि चनाखो हुनु पर्ने बेला आएको छ । बेलायतमा हालै गरिएको एक सर्वेक्षणबाट प्रायः फूल उपहार दिने प्रेमी धोकेबाज हुन्छन भन्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । झण्डै ३ हजार महिलाहरुमा उक्त सर्वेक्षण गरिएको थियो ।
प्रेमको प्रतिक मानिने हरेक उपहारको विशेष अनि भिन्न अर्थ हुने सर्वेक्षणमा संलग्न अनुसन्धानकर्ता गे्रग्स वेकर्सको भनाइ छ । मनमा कुरा लुकाएर राख्ने प्रेमीले चक्लेट उपहार दिने उनले बताए । त्यस्तै, क्यान्डल लाईट डिनरमा निमन्त्रणा गरेमा प्रेमिकाले अझ सजक हुनु पर्नेछ ’cause यसको अर्थ हो- ‘इज्जतमै दाग लाग्ने केही नराम्रो हुादैछ ।’ यसैगरी, वेकर्सले सर्वेक्षणको आधारमा के दाबी गरेका छन् भने अधिकांश श्रीमतीहरु ‘सरप्राइज गिˆट’ लिन मन पराउाछन् । ध्यान रहोस, यस्तो गिˆटले सम्बन्ध पनि डामाडोल हुनसक्छ । के तपाइर्ं पनि आˆनो प्रेमिकालाई कुनै गिˆट दिने बिचारमा हुनुहुन्छ ? माथिका कुरा नविर्सिनोस है /
निराश मानिस बस्ने घरका जनावरपनि रोगी
निरोगी रहेर धेरै बााच्न मन कसलाई हुन्न है ? हरेकलाई हुन्छ । बैज्ञानिकहरूले त्यसरी बााच्न सकिने केही आधार र अक्किलहरू सुझाएका छन् । त्यसको लागि कुनै कष्ट पर्दैन । झन मज्जा हुन्छ । रमाइलो लाग्छ । खर्चिलो पनि छैन । आफैंले अलिकति कोसिस गरे, आफैंलाई अलिकति नियन्त्रण गरिदिए स्वस्थसित लामो आयू बााच्न सकिन्छ । अनि लागेका रोगपनि छिटो सन्चो हुने । आफूभित्रको बेखुशि, आक्रमक स्वभाव, नैराश्यता, नकारात्मक सोच, रिस र आवेग जस्ता चिजलाई नियन्त्रण गरिदिए पुग्छ ।
वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ, बेखुशि रहने मान्छेको तुलनामा खुशी रहने मान्छेको एउटा ठूलो फाइदा छ जिवनमा- सायद ति बढि स्वस्थ र तिनको आयूपनि लामो हुन्छ । अमेरिकी बैज्ञानिकहरूले हालसालै गरेको अनुसन्धानबाट के पत्ता लाग्यो भने सन्तुस्टि, आशावादी, सकारात्मक उत्तेजनाले बढि स्वस्थ राख्नुको साथै आयू लम्ब्याउने रहेछ । हालसम्म भएका करिब १६० वटा अध्ययनहरूलाई अध्ययन गर्दा सकारात्मक सोचले राम्रो स्वास्थ्य र दिर्घायूलाई सहयोग गर्न रहेछ । मान्छेको मूड र उत्तेजना, मानसिकताको सम्वन्ध उच्च रक्तचाप, कोर्टिसोल लगायतका तत्वसित संवन्धित हुने रहेछ । अध्ययनहरूले के देखाए भने निरासा र नकारात्मक सोचले उच्च रक्तचाप बढाउने गर्छ । रिस, आवेग र आक्रामक बानी ब्यवहारले मुटु सम्वन्धि समस्या त निम्त्याउाछ नै, त्यस्ता रोगहरूलाई अझ फैलाउने काम पनि गर्छ। नैराश्यताले रोग निरोधक क्षमतालाई कम गराउाछ । निराश हुनेहरू रोगसाग लड्न कम सक्षम हुन्छन् । त्यस्तै, सकारात्मक प्रभावले रोग निरोधक क्षमता बढाउाछ । सकारात्मक प्रभाव हुने ब्यक्तिले समाजमा छिटो विश्वास जित्न सक्छ, सामाजिक काममा बढि सफल हुन्छ, सामाजमा धेरै सम्वन्ध बढाउन सक्छ र स्वस्थ ढंगले काम फत्ते गर्छ ।
बैज्ञानिकहरूले के पत्ता लगाए भने सकारात्मक सोच हुनेहरूलाई यदि मुटुको सम्वन्धि रोग छ भने छिटो सन्चो हुन्छ । आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत हुनेहरूको घाउ पनि ढिलो सन्चो हुने रहेछ शान्त तरिकाले प्रस्तुत हुनेहरूको तुलनामा । क्यान्सरका कोषहरू पनि आक्रामक मानिसमा छिटो फैलिने रहेछन् । त्यतिमात्रै हो र ? यदि घरको मानिसमा नैराश्यता छ भने त्यसले घरमा पालेका जनावरलाई पनि असर गर्ने रहेछ । नैराश्य र एक्लोपनले गााजेका मान्छेको घरमा यदि बाादर, कुखुरा र सुागुर छन् भने तिनको रोग निरोधक क्षमतालाई पनि कम गर्ने रहेछ । कुनै रोग लाग्यो भने त्यस्तो मानिसले पालेका जनावरलाई ? ढिलो सञ्चो हुन्छ, बढि रोगी हुन्छन् ।
बादरको बिहेलाई हात्तीको लस्कर
थाइल्याण्डमा एक जोडी बादरको बिहे भब्यताका साथ गरियो । त्यहााको सोङला चिडियाखानामा ओराङओटन भनिने बाादरका जोडीलाई बिहे गराइदिन घरपालुवा जनावर मध्ये पाल्नकालागि सबै भन्दा महागो मानिने हात्तीहरूको लस्कर लगाइएको थियो ।
दुलहीको नाम न्यान्सी । उमेर २० वर्ष । दुलाहा चाहिा जम्मा १२ वर्षपुगेको । नाम सुरिया । नाम अनुसार सुरो नै रहेछ दुलाहा । प्राय भाले भन्दा पोथी कम उमेरको खोज्ने गरिएपनि यी बुढी कन्या भने आफू भन्दा कम उमेरको केटो पाएर दंग रहिछिन् ।
पहिलेको भालेबाट टोटो नामको केटो जन्माइसकेकि न्यान्सीले फेरी यस्तो भर्खरको केटो पाएकी । तिन महिना देखि यीनको प्रेम बसेको । माया गर्नथालेका एकले अर्कालाई । हिमचिम बढ्यो । अनि सागै बस्न थालेछन् । तिन महिनादेखि मायामा चुर्लम्म डुबेका यि एकले अर्कालाई चिने । बुझे । अनि भयो बिहे केही दिन अघि ।
चिडिया खानाका मान्छे पनि कति दयालु प्रणय दिवसका दिन यीनको लागि विशेष कार्यक्रम गरेर प्रेम दिवस मनाइदिए । यिनको बिहेमा हात्तीका लस्कर लगियो । त्यस मध्ये तिन वटालाई विशेष तरिकाले सिागारियो । त्यसको लागि निकै खर्च गरियो । जन्तिका रूपमा उपस्थित भए स्थानिय मान्छे र पर्यटकहरू । त्यसदिन कान मार्क भनिने विशेष क्षणपनि देखाइयो । जुन बेला दुलहीले दुलाहालाई विशेष उपहार दिनु पर्छ । दुलाहा सुरियाले पनि आˆनी प्यारी न्यान्सीलाई उपहार दियो ।
हाम्रो समाजमा जन्तिलाई प्रमाणमा रूपमा लिने गरिन्छ । तर थाइल्याण्डका अधिकारीहरूले यतिमै चित्त बुझाएनन । स्थानिय अधिकारीहरूले दुई जनाको वैवाहिक प्रमाणपत्रमै हस्ताक्षर गरे । फोटो खिचेर प्रमाण राखे । अहिले यि जोडी हनिमुनमा मस्त रहेको बताइएको छ ।
यो बिहेका लागि विशेष रूपमा सिागारिएका तिन बाहेक त्यहाा अन्य नौ वटा हात्ती थिए । ति प्रत्येकमाथि एक जोडी विवाहित थिए । तिनले आˆनो माया देखाउन र हात्तीप्रति सम्भाव देखाउन ‘हामी एक अर्कालाई माया गर्छौं, हामी हात्तीलाई प्रेम गर्छौं’ भन्दै नारा लगाएका थिए ।
बर्डˆलु नलाग्ने कुखुराको नष्ल तयार
मान्छेले चाहे के असम्भव रहेछ त ? हरेक वर्ष बर्डˆलुको आतंकले हैरान परेका थिए मानिस । अब भने ढुक्क हुने भएको छ । वैज्ञानिकहरूले बर्डˆलु नलाग्ने कुखुरा को नष्ल तयार पार्नसफल भएका छन् । वैज्ञानिकहरूले कुखुराको वंशलाईनै बदलिदिएर बर्डˆलु नलाग्ने बनाइदिएका हुन । विभिन्न खाले चराहरूमा फैलिादै यो रोग मान्छेमा नसरोस भनेर यस्तो कुखुरा निकालिएको हो । अब बिना डर त्रास कुखुराका सपेटा खान पाइने, मानिसमा सरेर लाग्ने उपचार खर्च जोगिने, सास्ती भोग्नु नपर्न र कुखुरामा लागेर लाखौा लाख क्षति ब्यहोर्नु नपर्ने आशा वैज्ञानिकहरूले गरेका छन् ।
वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धानमुलक पत्रिका साइन्सका अनुसार युरोपेली वैज्ञानिकहरूले कुखुराको वंशालाई नै केही बदलिगरिदिएर -वा नष्ललाई अलिकति बदलिदिएर) बर्डˆलु नलाग्ने बनाएका हुन । क्याम्बि्रज र एडनबर्गका वैज्ञानिकहरूले यो नष्ल बदलिएको कुखुरामा बर्डˆलु लाग्न सक्ने तर अरुमा भने नसर्ने दाबी गरेका छन् ।
हुनत यो बर्डˆलु मुख्य गरी चरामा र खासगरी कुखुरामा लाग्छ । तर मानिसमा सरेपछि श्वास प्रश्वास लगायतका अन्य समस्या ल्याउाछ । मानिसमा सरेको घटना सन् १९९७ मा हङकङमा फेला परेको थियो । सन् २००४ मा मलेशिया, भियतनामलगायत विश्वका थुप्रै ठाउामा देखा परे ।
अहिले तयार पारेका कुखुरा भने उनीहरूले मानिसले खाने अवस्था भइनसकेको र उनीहरू अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमै रहेको बताएका छन् । आफूहरू बर्डˆलु लाग्दै नलाग्ने मानिसले खान हुने कुखुराको विकास गर्ने चरणमा रहेको अनुसन्धानमा संलग्न क्याम्बि्रज विश्व विद्यालयका लोरेन्स तिलेले बताए । अहिले उनीहरूले उत्पादन गरेका कुखुरा अनुसन्धानका लागि मात्रै भएको उनीहरूको भनाई छ ।
बर्डˆलु लाग्ने जुन अनुवंशिकि -जिन) हुन्छ त्यसलाईर् नै निर्मूल गरिदिने प्रविधि भेट्टाएका हुन । उनीहरूले विकास गरेका कुखुरामा बर्डˆलुको जीवाणु राखि दिएर अरु कुखुरासाग छोडीदिादा नश्ल बदलेको र नबदलेको कुनैपनि कुखुरामा नसरेको निक्र्याैल भएपछि यो तथ्यलाई बाहिर ल्याएको दाबी गरेका छन् । बर्डˆलु ठूलो समस्याका रूपमा रहेका क्षेत्रमा यसले आर्थिक सुधार र मानवीय स्वास्थ्यमा ठूलो सहयोग पुग्ने आसा वैज्ञानिकहरूको छ ।
प्लास्टिक चीलको लागि सान देखाउने चिज
चराको संसारमा पनि सान र मान हुन्छ । खासगरि चीलहरूको दुनियाामा । तर फरक के भने यिनलाई गाडी चाहिन्न । घर भने चाहिन्छ । हो त्यहि घर बनाउादा प्लास्टिक लगेर सान देखाउाछन् । मान्छेले अनेक तरिकाले प्रयोग गरिसकेर मिल्काएको प्लास्टिक त चीलको लागि सान देखाउने गज्जबको चिज रहेछ । मांशहारी चरा’bout अनुसन्धान गरिरहेका अमेरिकी बैज्ञानिकहरूले गज्जबको तथ्य पत्ता लगाए । चीलहरूले एकदम सेतो रंगको प्लास्टिक खोजि खोजि जम्मा पारेर ल्याउने रहेछन् । त्यसले चट्ट सिागार्ने रहेछन् गूाड । त्यसो गर्दा त्यो गूाडबाट जन्मेका बचेरा भविष्यमा एकदम तगडा, लडाकू बन्ने रहेछन् । त्यस्तो गूाडबाट बचेरा पनि धेरै कोरलिने रहेछ ।
चराहरूमा एउटाले बनाएको गूाड अर्कोले लिने चलन छ । कमजोरलाई लखेटेर बलियोले हडप्ने । कत्ति दुख गरि गरि हप्तौं, महिना लगाएर जम्मा पारेको सामानले गूाड बनाएको देखेपछि बलियोले आएर लघार्ने अनि त्यसमा आफूले फुल कोरल्ने । आलटाल गर्‍यो भने भुतल्ने । खुट्टासुट्टा भााचिदिने । रगताम्य बनाइदिने । उस्तै परे मारीदिने ।
अमेरिकी बैज्ञानिकहरूले यो तथ्य पत्ता लगाउन दक्षिण पश्चिम स्पेनको दोनाल्या राष्ट्रिय निकुञ्जमा पााच वर्षलगातार अनुसन्धान गरे मांशहारी चरा’bout । त्यहाा उनीहरूले १२७ वटा चीलहरू -ब्लक काईट) मा अनुसन्धान गरेको साइन्स जर्नले सार्वजनिक गरेको छ । अरु
रङको प्लास्टिक दिादा के गर्लान भनेर बैज्ञानिकहरूले पारदर्शी र हरियो रङको पनि दिएका थिए । तर चीलहरूले सेतोनै रुचाए ।
भाले पोथी दुबैले सेता प्लास्टिक गूाडमा ओसारेका थिए । सात देखि १२ वर्ष उमेरकाले बढि प्रयोग गरेका थिए । बैज्ञानिकहरूको भनाईमा यो उमेर एकदम सबल, स्वस्थ र प्रजनन गर्ने बेलाको हो । नहुर्केका र बुढा उमेरका चराले भने प्रयोग गरेको त्यति पाइएन । अनुसन्धानकर्मीहरूले चराको गूाडमा थप प्लास्टिक राखिदिादा तिनले अलक्कै थाहा पाए । तिनलाई झिकेर पाखा राखिदिए । यसो त वैज्ञानिकहरूले चराको गूाडको क्रियाकलाप अवलोकन गर्न थालेको हालसालै मात्रै होइन । सन् १८०० देखिनै हो । तर प्रजनन प्रक्रियामा यस्तो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ यो आकर्षणकालागि मात्रै होइन भन्ने तथ्य पत्ता लागेको भने यो पहिलो पटक हो । प्लास्टिक अस्तित्वमा आउनु पहिले चराले लूगा र कागज प्रयोग गरेको हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् । त्यो भन्दा पनि पहिला अन्य चराका चम्किला प्वााख, भेडा बाख्रा र चित्तलका भुत्लाले रंगाउने गरेको हुन सक्छ ।
बालबालिकालाई चराका गीत सुनाइदिए शान्त हुन्छन्
बच्चाले औषधी खान मानेनन ? उपचार गर्ने बेलामा ऐया र आथा गरेर हैरान पारे ? शल्यक्रिया गर्नु पर्ने बालबालिका नर्सको सुई हातमा देख्नासाथ चार हात खुट्टा फालेर चर्किन थाले ? अरालेर अस्पत्तालनै थर्काउाला झैा गरे ? ल गज्जबको तरिका पत्ता लगाएका छन् वैज्ञानिकहरूले । महागो छैन । नपाइने पनि होइन । चराका गीत सुनाइदिने ।
हो, बेलायतका केही वैज्ञानिकहरूले उपचारका क्रममा बालबालिकालाई चराका गीत सुनाइदिए बढि शान्त हुने गरेको तथ्य पत्ता लगाएका छन् । यसलाई उनीहरूले प्रयोगमै ल्याइसकेका छन् । चिकित्सक र बिरामीका आफन्तलाई निकै सहज हुन थालेको तथ्य भेटिएको छ । बेलायतको लिबरपूल स्थित आल्डर हे अस्पत्तालमा हालसालै देखि यो तरिका अपनाउन थालिएको हो ।
अहिले उक्त अस्पत्तालमा चराका गीत, वषर्ा र हावा हुरीका आवाज सुनाउन थालिएको छ । ती अस्पत्तालकै बालबालिकाले तयार पारेका हुन । त्यस्ता गीतमा स्पि्रङफिल्ड पार्कमा लगेर त्यहााका कलाकर्मी क्रिस वाटसनले संगित हालिदिएका थिए । र त्यसको मुख्य काम भने बालबालिकाले गरेका थिए । अहिले त्यो गीत आल्डर हे अस्पत्तालको सम्पूर्ण बालबालिका कक्षामा सुनाउने गरिन्छ ।
शल्यक्रिया गर्दा, सुइ दिादा वा अन्य कठिन उपचार गर्न बेला त्यो संगित सुनाइदिनाले बालबालिका शान्त हुने गरेको पाइएको छ । चिकित्सकलाई उपचारमा सजिलो हुने गरेको छ । बालबालिका बाहेक अन्यलाई पनि चराका त्यस्ता गीतले उपचारका क्रममा शान्त पार्ने गरेको तथ्य उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । अहिले मुख्यतः चााचर, धोबिनी चरा, तितु र कल्चुाडेका गीत रेकर्ड गरेर सुनाएका छन् । यी मुख्य त गाउाघर वरिपरि पाइने र गीत गाउने चरामा पर्छन् ।
चराका गीतले अस्पत्तालमा बालबालिकालाई शान्त पार्नसकेको सफलता पाएपछि फाउण्डेसन फर आर्ट एण्ड क्रिएटिभ टेक्नोलोजीका कला कार्यक्रम निर्देशिका लाउरा सिलेयर्सले भनिन- प्राकृतिक संसारलाई घरमा भित्र्याउन सक्दा अस्पत्तालका विरामीहरूले ठूलो फाइदा लिएको पाएका छौं । हाल उनीहरूले ती चराका गीत अस्पत्तालको गोरेटो र बिरामी तथा आगन्तुक हिाडडुल गर्ने अन्य क्षेत्रमा पनि बजाउन थालेका छन् ।
त्यसको प्रभावले गर्दा घरमा लगेर बजाउनको निम्ति थुप्रै अभिभावकहरूले ती गीत सिडिमा निकाल्न आग्रह गरेको र त्यसको माग बढ्दै गएको कार्यक्रम निर्देशिकाले बताएकी छन् । यसबाट प्राकृतिको संगीतलाई प्रयोग गरेर उपचार पद्धतिमा ठूलो सफलता हासिल हुन सक्ने दाबी उनीहरूको छ ।
यो सफलतापछि यसले दुखाई कम गर्न र रोग छिटो सञ्चो हुनपनि सहयोग गर्छ कि भनेर हाल चिकित्सकहरू खोजीमा लागेका छन् । चराका गीतले मानिसलाई आनन्द दिने, प्रफुल्लित बनाउने, गीत संगीतमा प्रेरणा दिने काम त सयौं वर्षदेखि हुादै आएको हो । तपाइर्ंहरूलाई पनि सुन्न वा सुनाउन मन लाग्यो भने ‘पाइन्न क्यारे नेपालमा त’ भन्दै नबस्नुहोला । बर्डसङ डट कम ९दष्चमकयलनक।अom० टाइप गर्नुभयो भने सयौं चराका गीत र आवाज सितैमा पाइन्छन् ।
कुकुरले पर्खाल देख्नासाथ खुट्टो उचालेर पिसाव गर्नाको कारण
कुकुरले यस्सो पर्खाल, अलिकति उठेको, अग्लो त केही देख्दै नहुने खुट्टो उचालिहाल्ने किन होला ? । यसको वैज्ञानिक कारण भने बडो चाखलाग्दो रहेछ । -भाले त पोथी दुबै कुकुरले पिसाब तुर्कयाएर आˆनो स्तरको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन् । -उच्च रवाफिला भाले कुकुरहरूले अझ बढि पिसाब तुर्कयाएर आˆनो प्रभुत्व देखाउाछन । -भेट्नु अघिनै पिसाबको माध्यमले कुकुरहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । पिसाबको गन्धले हरेक कुकुरको स्वाथ्य र अन्य पहिचान दिन्छ ।
भाले र पोथी दुबै कुकुरले उचाइ, खुट्टो उचाल्ने आकार, क्षेत्र र पिसाबको गूणको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । एनिमल नेचरमा हालसालै प्रकाशित तथ्यले के भन्छ भने कुनै एउटा कुकुरले तुर्कयाएको ठाउामै तुर्कयाउने अर्को कुकुरको स्तर अघिल्लोको भन्दा बढि हुन्छ । यस अघिल्ला अध्ययनहरूले भने के देखाएका थिए भने त्यसरी तुर्कयाउने काम भालेले गर्छन् र त्यो पनि पोथीले तुर्कयाएको ठाउामा त्यसको प्रतिउत्तर स्वरूप मात्रै ।
त्यसैले अघिल्ला रिपोर्टले के देखाएको थियो भने पोथीको पिसावलाईर् छोप्न वा नस्ट गर्न भालेले पिसाब गथ्र्याे । अहिलेको तथ्य पत्ता लगाउन वैज्ञानिकहरूले ४८ वटा कुकुरमा परिक्षण गरेका थिए । काठका ठुटाहरू राखिदिएर त्यसमा पिसाब फेर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए ।
उनीहरू कुकुरले सु गर्दा पुच्छर कति माथि उठाउाछ, नाकले कति सिासिा र फिंफि गर्छ खुट्टो कुन आकारमा कति उचाल्छ र दाह्रा कति निकाल्छ भन्ने पनि अध्ययन गरे । पुच्छर लामा हुने कुकुरको स्तर उच्च हुने रहेछ । पुच्छर लामा हुने कुकुर अरु कुकुरको पिसाबबाट तिनको अवस्था चाल पाउन बढि तगडा हुने रहेछन ।
भाले र पोथी दुबैले पिसाब तुर्कयाउने गरेपनि भालेहरूले पोथीहरूले भन्दा बढि तुर्कयाउने रहेछन । कुकुरहरू एक अर्कामा भेट हुनु अगाडिनै त्यही पिसाबको अध्ययनबाट धेरै कुरो पत्ता लगाउने रहेछन । पिसावको रासायनिक ज्ञानका आधारमा जानकारी भइसकेपछि ति सम्मुख हुादा कसरी लड्ने, कताबाट आक्रमण गर्ने, कसरी आक्रमण गर्ने भन्ने निर्णय लिन कुकुरहरूलाईर् सहज हुने रहेछ ।
भाले चिम्पान्जीले बुढी रुचाउने
चिम्पान्जीहरू मानवसित मिल्ने सबैभन्दा नजिकका जीव मानिन्छन । तर एउटा बानी यस्तो फेला पर्‍यो चिम्पान्जी र मानवबिच कि ठ्याक्कै उल्टो । मानव जातिमा पुरुषहरूले आफूभन्दा कम उमेरका केटी रुचाउाछन । महिलाले पनि आफू भन्दा पाको केटो । तर चिम्पान्जीहरू चाहिा आफू भन्दा बढि उमेर भए र पाइसम्म अझ बुढीलाईर् साईड हान्ने रहेछन ।
यो घटनाले वैज्ञानिकहरूको टाउको खायो । अनि थाले अनुसन्धान गर्न । उनीहरूले के पाए भने चिम्पान्जीहरू दिर्घकालसम्म एउटै पोथीसित बस्दैनन । भविष्य बिताउने होइन । स्याहार सुसार गर्नुपर्ने होइन । संभोग गर्ने त हो, संभोगको मज्जा लियो छोडिदयो । अर्को याममा कुन पोथी भेटिने हो के थाह ? त्यसैले उनीहरू बुढी ताक्ने रहेछन । अर्को कारण ऋतु कालमा जब पोथीलाईर् भालेको चाख हुन्छ तब बुढी चिम्पान्जीहरू भालेहरूको नजिक नजिक साईड हान्न जाने रहेछन । नजिकै पाएपछि भालेपनि मख्खै । तिनै बुढी सित बस्यो । त्यही कारणले गर्दा भाले चिम्पान्जीलाईर् कम उमेरका पोथी चहार्दै हिाड्नै परेन ।
तर मान्छेको ? मानव जातिमा आफैाले पाल्नु पर्छ । कर उमेरकालाईर् कम रोग लाग्छ र खासगरी बढी उत्पादनशील हुन्छन । त्यसले गर्दा भविष्यमा पनि तिनले स्वस्थ बालबच्चा जन्माउाछन । बुढीहरू छिटो अनुत्पादक बन्छन । यो तथ्य पत्ता लगाउने हुन अमेरिकाको बोस्टन विश्व विद्यालयका मार्टीन मुलर र हार्भर्ड विश्व विद्यालयका उनका सहकर्मीहरू ।
बुढा पोथीहरू भालेको निकट जाने, सहज रूपमा पाइने, मासिक स्रावका बेला भालेको नजिकिने, बलिया र ठूला भालेतिर बढि लहसिने भालेको बथानमा गएर भाले भालेबिच जुधाएर आफूले फाइदा लिन खोज्नाले पनि भाले चिम्पान्जीहरूले बुढीहरू रुचाएको पाइएको अनुसन्धानकर्मीहरूले बताएका छन ।
बाघको आकार घटिरहेको छ
विश्वमै अति संकटापन्न अवस्थामा पुगिसकेका पाटे बाघहरूको संख्या घट्दै गएको त सबैलाईर् थाह भएकै कुरो हो । विश्वभरि बेंगाल टाइगर भनेर चिनिने बाघमाथि झन अर्को समस्या थपिएको रहेछ । जंगलमा हज्जारौं किमी क्षेत्र ओगटेर सारा जीवजन्तुलाईर् लघारेर, जितेर बस्न सक्ने जिवलाईर् के समस्या होला ? के पिर ? केको चिन्ता ? तर अचानोको पिर खुकुरीले जान्दैन भने जस्तै रहेछ । यी जीव तनावै तनाव र चिन्तामा पो रहेछन । कतिसम्म होला त तनाव पनि ? शरीरको आकारै घट्दै गएको रहेछ पाटे बाघहरूको तनावकै कारण । जंगलमा स्वतन्त्र पूर्व राइादाइा गरेर जिउने यस्ता अजंगका जीवलाईर् तनाव हुनुको कारण के होला ? वैज्ञानिकहरूले बढ्दो वातावरणीय परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्यालाईर् कारक मानेका छन । भारतमा भएको एक अध्ययन अनुसार पाटे बाघको संख्या मात्रै घटेको नभएर अब बाघको आकार पनि घटिरहेको छ । विशेषज्ञहरूले बाघको शरीर र तौल तनावले गर्दा घटिरहेको बताएका छन । बंगलादेशसित सिमाना जोडिएको भारतको सुन्दरवन बाघ आरक्षका बाघहरूको अध्ययन गर्दा त्यो तथ्य फेला पर्‍यो । वातावरणीय परिवर्तनको असरले गर्दा तिनको प्राक्रितिक वासस्थानमा प्रभाव पार्नजाादा त्यसो भएको भनाई उनीहरूको छ । सुन्दरबनका बाघहरूको स्थिति’bout अध्ययन गर्दा त्यहााका बाघको शरीर एक दशकभन्दा अघिको तुलनामा हलुंगो र सानो भएको पाइयो ।
यस्तो अध्ययन नेपालमा नभएकाले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर भारतमा फेला परेको यो तथ्यले हाम्रा बाघहरूको अवस्था पनि धेरै भिन्न छैन कि भन्ने संकेत गर्छ । ’cause नेपालमा पाइने बाघ र त्यहाा पाइने बाघ एकै जातिका हुन । तिनको आहारा, वासस्थान, आनीबानी र बाघ संकटमा पर्नाको कारण पनि दुबै देशमा समान छन । ‘स्वस्थ देखिएपनि हामीलाईर् के अचम्म लाग्यो भने तिनको तौल जम्मा ९८ किलो मात्रै थियो’ सुन्दरवन बाघ आरक्षका निर्देशक सुब्रत मुखर्जीले भने । सुब्रत मुखर्जीका अनुसार एउटा स्वस्थ बाघको तौल एक सय ४० किलो भन्दा कम हुनु हुादैन ।
समस्याका थप कारण के-के हुन सक्छन । तिनको वासस्थानमाथिको अतिक्रमण त छादैछ, प्राकृतिक वातावरणमा आएको बदलीले पनि प्रभाव पारिरहेको छ । बढि वषर्ादले गर्दा समुदि्र सतह बढिरहेको छ । त्यसको अर्थ ठूला नदी र गंगाहरूमा पनि बाढी बढ्छ । भारतको गंगा, ब्रहृमपुत्र र मेर्ना जस्ता ठूला नदीमा बाढी धेरै आउादा त्यसले घाासे फााट र सिमसार क्षेत्र ढाकिदिन्छ ।
घाासे फााट चित्तलहरूको प्रमुख वासस्थान हो । बाघको प्रमुख आहारानै चित्तल र मृग हुन । त्यस्तो बाढीले सानातिना पोखरीहरू पुरि दिने, ढाकि दिने गर्छ । त्यस्ता पोखरीहरूले बाघले आहारा बनाउने जीवहरूलाईर् आकर्षण गरेका हुन्छन । बाघको प्रमुख आहारा भनेकै चित्तल -कतै कतै चित्री पनि भन्छन) हो । नदीमा बाढी आएर जंगल ढाकिदिनाले चित्तलहरूको संख्या घटिरहेको पनि मुखर्जीले ए एफ पी समाचार संस्थालाईर् बताए ।
यी सबै समस्याका कारण गर्दा बाघ उचित आहाराको अभाव र कुपोषणबाट ग्रसित छन । ‘त्यसैले गर्दा शारीरिक रूपमा बाघ तनाव र चिन्तामा छन । भोक लाग्दा आˆनो वासस्थानमा आहारा नपाएपछि ती बाख्रा र गाइ गोरु खोज्दै मानव वस्ति पस्छन’ मुखर्जीले भने ।
पिलपिल गर्ने जूनकीरी भालेलाईर् नै खाइदिन्छन
जबसम्म जूनकीरी झिलिक मिलिक गर्दैनन र जूनकीरीका गीत सुनिादैन तबसम्म गर्मीयाम लागेको अनुभव गर्दैनन गाउाघरका थुप्रै मान्छे । अर्थात् जूनकीरीहरूले गर्मीयाम संकेतको पिलपिले आगो बोकेर आउाछन घर आागन, करेसाबारी र चौरतिर । मसिना होउन की तिनले अाध्यारो नै रुचाउन, तिनमाथी धेरैको ध्यान भने केन्दि्रत हुने गर्छ । तिनको हरियो र पहेालो प्रकाशका ’boutमा धेरै गीत लेखिएका छन । कथाहरू बुनिएका छन । ध्यान तानिएका छन । बच्चाहरू त झन जूनकीरी खोज्ने भन्दै घाासतिर दगुरादगुर नै गर्छन् । तर त्यही पहेालो प्रकाशले भाले जूनकीरीलाईर् भने जीवनको अन्त्यतिर डोर्‍याउाछ भन्ने चाख लाग्दो तथ्य भने कतिलाईर् थाह होला ?
जाडोयाम सकिएर जब गर्मी महिना शुरु हुन्छ तब सााझको गरम वातावरणमा जूनकीरीका भालेहरू घाास र झाडीतिर सलबलाउन थाल्छन । ती प्रायः सम्म फााट र नजिकै जंगल भएको छेउछाउमा बढि सलबलाउन रुचाउाछन । पाका भालेहरूले घाासबाट माथि उडेर पहेालो र हरियो रंग निकाल्दै पोथीहरूलाईर् यौनाकांक्षाको संकेत गर्छन् । पोथीहरू पनि के कम ? भालेका प्रकाशहरूको तिनले वरिपरिबाट अवलोकन गर्छन् । पोथीहरूलाईर् चाख लागेमा तिनले पनि बत्ती बालेरै सकारात्मक संकेत दिन्छन । अध्ययनहरूले के देखाएका छन भने धेरै चम्किलो र छिटो बत्ती बाल्न सक्ने भालेहरू पोथीका छनौटमा पर्छ ।
हामीलाईर् उस्तै लागेपनि जूनकीरीका थुप्रै प्रजाति हुन्छन । त्यसैले भालेहरूले आˆनै प्रजातिको कुन पोथीले संभोगको स्वाद लिएकी छैन भनेर ढुकेर बस्छन । त्यस्तै पोथीको खोजीमा लाग्छन । किन संभोगको अनुभव नभएका पोथी कुर्छन् त भालेहरूले ?
यसको चाख लाग्दो तथ्य के छ भने संभोग गरिसकेका पोथीहरूले शरीरको रसायन बदलेर संभोग गर्न आउने भालेलाई नै खाइदिन्छन । त्यो तथ्यको जानकारी भालेहरूलाईर् हुन्छ । पहिले भालेलाईर् संभोगका लागि संकेत दिने त्यही प्रकाश त्यस्ता पोथीहरूले एक पटक संभोगको स्वाद लिइसकेपछि भने भालेलाईर् आहारको रूपमा खान हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नथाल्छन । कतिपय पोथी त यति बाठा हुन्छन कि तिनले शंका नगर्न र अनुभव नभएका भालेहरू जति सक्दो धेरैलाईर् आकर्षण गर्ने र छक्याएर आहारा बनाइदिने गर्छ ।
जति छिटो बत्ती बाल्यो उति पोथीले रुचाउने हुादा भालेहरू पनि आहारा बनाउने पोथीका धरापमा पर्छ । ’cause तिनले पोथीहरूले रुचाउलान भन्ने आशाले झन छिटो छिटो बत्ती बाल्ने कोसिस गर्छ । त्यसैले हरेक सााझ भालेहरूले बाल्ने बत्तीमा ‘सेक्सको आनन्द की जीवनको समाप्ती’ भन्ने जोखिम रहन्छ । केही वैज्ञानिकहरूले भने छिटो र चम्किलो बत्ती बाल्न सक्ने भालेहरूले धेरै पोथी ओगट्ने बताएका छन । तिनको भनाईमा कहिलेकही त कुनै भालेले सयौं पोथी खेलाउाछ ।
नौ दशकमा साठी प्रतिशत जिवजन्तु सखाप
हामी मानिसहरू कति बिधंशकारी भएछौं हा । नदीका माछा हाम्रै कारणले सखाप । हरियो वन हाम्रै कारणले नासिने । पाखाका जिवजन्तु हाम्रै हातले निमिठ्यान्न पार्ने । श्वास फेर्ने हावापनी हाम्रै कारणले आकासमै प्रदुषित । बााकि रहेका हरेक जिव, पात पतिंगर, किरा फट्यांग्रा र माटोका ढिस्कोको अस्तित्वसमेत संकटमा परिरहेको छ दिनदिनै ।
मानिसको यहि बिधंशकारी क्रियाकलापले गर्दा कति जिवजन्तुको जीवन संकटमा पर्ने होला ? अमेरिकामा गरिएको अनुसन्धान अनुसार सन् २१०० सम्म वा आगामी ९० वर्षभन्दा पनि अगाडिनै हाल जानकारीमा रहेका उष्ण प्रदेशका जिवजन्तु मध्ये १८ देखि ४५ प्रतिशत मात्रै अस्तित्वमा रहने छन । बााकी सबै समाप्त हुनेछन ।
अमेरिकाको कार्नजी इन्स्टचुसन्स डिपार्टेन्ट अफ ग्लोबल इकोनोमीले उष्ण भागका वनमा गरेको अनुसन्धानले यो तथ्य देखाएको हो । यो भागका जिवजन्तुले सामना गर्नुपर्ने सबै भन्दा ठूलो समस्या नै ब्रमाण्डमा बढेको तापक्रमबाट पर्ने असरलाईर् उनीहरूले औंल्याएका छन ।
त्यसबाट जोगाउन वन फाडानी रोकेर जिवजन्तुलाईर् बढि फराकिलो वासस्थान दिने, उनीहरूलाई फराकिलो क्षेत्र छोडिदिने, बढ्दो तापक्रम वृद्धिलाई पचाउन सक्ने तरिका विकास गर्नसक्ने अक्किल निकाल्ने र तापक्रमको बदलीसागै तिनले पनि आफूलाईर् अनुकुल पार्दै लान सक्नुलाईर् सुझाव दिएका छन ।
बादरले फिल्म बनायो
मान्छेले फिल्म बनाउन त कति मुस्किल । कति प्रतिस्पर्धा हुन्छ । झन बादरले बनाएको फिल्म कस्तो होला ? न लेख पढ, न फिल्म बनाउने कलाको ज्ञान । कसरी बनाउने बादरले फिल्म ? तर एक पोथी बाादरले एउटा फिल्म आफैाले बनाएर मानिसहरूलाई अचम्मै पारिदिएको छ ।
कापुसिन नाम राखिएको एक पोथी बादरले ओडिप भन्ने एक फिल्म एक्लैले बनाएकि छे । फिल्म बनाउन चाहिने सामान आफैं जडान गर्न र मिलाउनमै दिन बिताउाछे उ । खिचेका क्लिपहरू आफैं सम्पादन गर्छ । यसो गर र यसो गर भन्दै आफैं निर्देश दिन्छे । अनि बल्ल दिउासोको खाना खान बस्छे । यसले बनाएको त्यो फिल्म प्रदर्शनीका लागि पन्सको क्लेर्मों फेरा फिल्म पर्वमा स्विकृत भएको छ ।
क्यापुसिन अन्य फिल्म बनाउने युवा निर्माता झैं फिल्म क्षेत्रमा देखा पर्नेसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन उनको काम देख्नेहरूले । यसले गरेको फिल्म क्षेत्रको काम मानव बाहेक कुनैपनि जिवजन्तुले गरेको पहिलो कार्य हो । त्यो फिल्म बनाउने काम कपुसिनले जापानको रिसर्चसेन्टर अन एनिमल ल्यावेजमा बनाएकि हो जहा यसले सानो फोन मार्फत् निर्देशन दिने गर्थी । यसले बनाएको फिल्ममा साना बाादरहरूले कसरी काम गर्छ भन्ने देखाइएको छ । बादरलाईर् यसरी फिल्म बनाउने दिन सकिने ’boutको प्रोजेक्ट बनाउने काम भने बादरको दिमाख ’bout विशेषज्ञ जापानका हिरोकाजु शिबुयाले गरेका हुन । सिबुयाका अनुसार कापुसिनले दश वर्ष प्रयोगशालामा काम गरेर तालिम लिएकी थिइ । त्यही भएर यसले ओइडी शिर्षकको त्यो फिल्म निर्देशन गर्नसकेकि हो । कापुसिनलाईर् किङ्कोङ असाध्यै मन पर्ने सिबुयाले बताए ।
सिबुयाले शुरुमा अपांगहरूलाईर् सहयोग गर्ने तालिम दिएका थिए अन्य जनावर र बादर सागै कापुसिनलाईर् पनि । एक जना शरीरिक रूपमा अशक्त मानिसको हेरचाहमा खटाइएको थियो कापुसिनलाईर् । कापुसिनमाथि बनाइएको अर्को डकुमेन्टि्र कापुसिनका अनुसार यसले टिभी र क्यामरामा चाख राखेको मानिसहरूले याद गरेका थिए । त्यो देखेपछि उनलाईर् फिल्मको निर्देशन गर्न लगाउने सोच बनाइएको थियो । निर्देशक लुइस नियटोले अहिले फिल्म बनाउने साधनहरू बादरतिर घुमाई दिने, तिनलाईर् दिने गरेर फिल्म बनाउने जिम्मेवारी दिन थालेका छन । उनले कापुसिनलाईर् कतिसम्म सुबिधा दिएका छन भने निर्देशकका रूपमा उनको कुर्सी छुट्टै छ । त्यसमा बसेर कापुसिनले मेगाफोन मार्फत् आफूलाईर् के-के चाहिन्छ, कहा के मिलाउनु पर्छ आˆना मानव सहयोगीहरूलाईर् निर्देशन दिने गर्छिन ।
कापुसिनले बनाएको यो फिल्म’bout मानिसहरूले आ-आˆनै ढंगले विवेचना गरिरहेका छन । कसैले यसलाईर् कट एण्ड पेस्ट अर्थात यता उतिबाट काटकुट गरेर ल्याएर जोड्ने काम मात्रै गरेको भनेका छन भने अर्काथरीले यो आधुनिक काम हो भनेर प्रशंसा गरेका पनि छन ।
एउटा वास्तबिकता के हो भने पछिला वर्षहरूमा जनावरलाईर् विभिन्न विषय र क्षेत्रमा तालिम दिएर मानव काम गर्नलागाउने प्रचलन र आकर्षण बढ्दो छ । नोराह नामको एउटा बिरालोलाईर् पियानो बजाउन दिइएको तालिम’bout पनि निक्कै चर्चा हुने गरेको छ । यसरी जनावरलाईर् तालिम दिादा जनावरमाथिको अधिकार हनन भएको र यातना हुने गरेको भन्दै जिवजन्तु अधिकारवादीहरूले आलोचना र बिरोध गर्ने गरेका छन ।
एक तिहाई जिवजन्तु र वनस्पती लोप हुने खतरामा
हाल विश्वमा रहेका सबै जिव जन्तु र वनस्पतीमध्ये एक तिहाई लोप हुने खतरामा रहेका छन । यो कुनै अनुमान होइन । संयुक्त राष्ट्र संघको वातावरणीय अध्ययन ईकाईले अनुसन्धान गरेर सार्वजनिक गरेको तथ्य हो । राष्ट्रसंघले त्यसको लागि विश्व जैविक विविधताकै अनुसन्धान र अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरेको हो । त्यसरी खतरामा परेका मध्ये हाल जानकारीमा रहेका मध्ये २१ प्रतिशत स्तनधारी, ३० प्रतिशत उभयचर र ३५ प्रतिशत मेरुदण्ड नभएका जिव छन ।
हुनत वैज्ञानिकहरूले जिवजन्तु माथिको यस्तो खतरा पहिले देखिनै अनुमान गरेका थिए । तर हाल जिवजन्तुमाथि देखिएको खतराको मात्रा पहिले सोचिएको भन्दा निक्कै तिब्र रहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन । त्यसले गर्दा जैविक विविधताको सम्पूर्ण परिवित्तीय प्रणालीमाथि नै क्षती पुगेको छ ।
केही जिवजन्तुहरू प्राकृतिक रूपमानै लोप हुन्छन । घट्छन र हराउाछन । प्राकृतिक ऐतिहासिक रूपमा लोप हुने त्यो दरलाईर् उति असामान्य मानिादैन । ‘अहिले त त्यो प्राकृतिक रूपमा लोप हुने मान्यता बिपरित १००० गुणाका दरले लोप हुने क्रम बढिरहेको छ’ संयुक्त राष्ट्र संघको जैविक विविधता अभिसन्धीहरू हेर्न प्रमुख अहमेद दोग्लाफ भन्छन ।
त्यसो हुनुको प्रमुख कारण पश्चिमी मुलुकमा जविक विविधताको अति दोहन, उपयोग नीति बढ्दै जानु र प्रदुषण रहेको बताइएको छ । ‘दूरदर्शि पाराले नसोचेर यदि यहि क्षणिक लाभ र तत्कालको लागि मात्रै उपयोग गर्ने मानसिकता रहने हो’ दोग्लाफले भने’ यदि आगामी २०५० मा पुग्ने आशा गरिएको ९ अरब जनसंख्याले अमेरिकीहरूको जस्तै जिवन पद्दती अागाल्ने हो भने हामीलाईर् पााच वटा गोलार्ध चाहिन्छ’ ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार अहिले ब्रहृमाण्ड मर्म र भरपर्तालनै गर्ननसकिने अवस्थामा पुगेको छ । खाद्यय चक्र बिगि्रनुको साथै वातावारणीय समर्थन गर्न आधार भत्किादै छ । आमाजोनको सदाबहार जंगल नाशिनु, सामुदि्रक जिवहरूको नाश र स्वच्छ पानीको प्रदुषण प्रमुख कारण रहेका छन । जैविक विविधताका यि प्रमुख तिन स्तम्भहरू भत्किएपछि वातावरणीय असन्तुलन व्यापक बढ्छ । त्यसले गर्दा जिवहरू लोप हुने क्रम वृद्धि हुन्छ । मानिसहरूको पेशागत जिवनस्तर भत्किन्छ । पानी र आहारामाथिको पहुाच माथि संकट आउाछ ।
यो निचोड विश्वका ११२ मुलुकको जैविक विविधता सम्बन्धि राष्ट्रिय अध्ययनका आधारमा निकालिएको हो । यि सबै देशले सन् २००२ सम्ममा निश्चित खाले वाचा गरेका थिए जैविक विविधता संरक्षणका लागि । तर कुनैपनि मुलुकले आˆना बाचा पुरा भने नगरेको बरु जैविक विविधताको नाश भने सोचे भन्दा व्यापक भएको दोग्लाफले बताए । त्यसले गर्दा विश्वभरिनै मानव जिवन र स्वास्थ्यलाईर् सुरक्षा गर्न जटिल अवस्था सृजना हुादै गएको उनीहरूले बताएका छन ।
एउटै बाघ जोगाउन १० हजार अमेरिकी डलर
एउटा बाघ जोगाउन वर्षको कति लाग्ला ? त्यसको अनुमान र आाकलन गर्नसकिएको छैन । तर बाघ संरक्षण यति महागो र चुनौतिपूर्ण हुादै गएको छ कि प्रत्येक बाघ जोगाउन वर्षको सााढे सात लाख रकम थप लाग्दै छ । अनुसन्धान अनुसार प्रत्येक बाघ संरक्षणका लागि बिगतको तुलनामा २४ प्रतिशत थप खर्चवृद्धि भइरहेको छ ।
विश्वमा अहिले कूल ३५०० वटा बाघ छन । चोरी शिकारी, वासस्थानमाथि अतिक्रमण र बाघमाथिका अन्य जोखिमलाईर् हटाउन बाघ संरक्षणमा यसअघि लगानी गरिए भन्दा थप २४ प्रतिशतका दरले वृद्धिभएको छ । अनुसन्धान अनुसार बाघ संरक्षणका लागि वाषिर्क ३ करोड ५० लाख डलर थप लगानि भइरहेछ । त्यो रकमलाईर् भाग लगाउादा प्रत्येक बाघको संरक्षणका लागि १० हजार अमेरिकी डलर पर्छ । त्यो रकम बाघ पाइने क्षेत्र र वासस्थानको रक्षा गरेर बाघको प्रजनन क्षमता बढाउने र संख्या वृद्धि गर्नको लागि खर्च गरिने हो । अहिलेसम्म बाघ पाईने ति क्षेत्रको संरक्षणका लागि भनेर संरक्षणवादी, स्थानीय, अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्था र स्थानिय प्रशासनले चार करोड ७० लाख डलर खर्च गरिसकेका छन । त्यो भनेको तिन अर्व रुपियाा भन्दापनि बढि रकम हो । बाघ पाइने ति उल्लेखित वासस्थान संरक्षणका लागि वाषिर्क ८२ लाख डलर लाग्ने उल्लेख छ ।
बाघका त्यस्ता वासस्थानहरू मध्ये भारतमा १८, ईन्डोनेशियामा आठ, रसियामा ६ र बााकी नेपाल, बंगलादेश र भुटानमा छन । यति धेरै रकम खर्च गर्दा पनि प्रत्येक बाघको संरक्षण सुनिश्चित गर्न नसकिने संरक्षणवादीहरूले बताएका छन । यो रकम खाली बाघका महत्वपूर्ण ठानिएका वासस्थानको समग्र संरक्षणमा ध्यान दिनका लागि मात्रै हो ।
अध्ययनका अनुसार विश्वका ७० प्रतिशत बाघ बााकी रहेको वासस्थान मध्ये ६ प्रतिशतमै रहेका छन । सनो ठाउामा धेरै बाघ रहेकाले तिनको संरक्षण सहज र महत्वपूर्ण ठानिएको छ । प्रत्येक बाघ संरक्षणकालागि त्यो रकम ठुलो देखिएपनि विशेषज्ञहरूले भने त्यसलाईर् ठुलो मानेका छैनन । भ्याट कन्सरभेसन अर्गनाईजेसनका एलन रोबोनोविजका अनुसार बाघको छालालाईर् बजारमा मानिसहरूले २० हजार अमेरिकी डलर तिर्नतयार हुन्छन । त्यसमाथि हड्डी, नङ्ग्ररा, यौनांग र अन्य भागको मूल्य जोड्ने हो भने करोडौं हुन्छ । ‘चोरी शिकारीहरूले बाघ मार्न गर्ने प्रयासको तुलनामा सााढे सात हजार डलर बाघ संरक्षणको लागि वृद्धि हुनु केही होइन’ उनले भने । उनका अनुसार एउटा मि्रत बाघका अंगहरूको मूल्य बजारमा ५० हजार अमेरिकी डलर -करिब ३६ लाख) भन्दा पनि बढि छ ।
त्यसो त त्यो रकम सिधा बाघ संरक्षणकै लागि मात्रै खर्च हुादैन । बाघ संरक्षणका नाममा गरिने त्यो रकम पर्यावरणिय पर्यटनका लगि पनि जाने गर्छ । बाघ संरक्षणको लागि नियुक्त गरिने कर्मचारी, स्वच्छ प्राकृतिक जीवन चक्रको विकास र बाघका आहाराको संरक्षणका लागि पनि खर्च गरिन्छ । वर्षको तिन करोड ५० लाख डलर के सानो हो त ? कहाा बाट आउाछ त यत्रो रकम ? विश्व अर्थतन्त्रको तुलनामा यो रकम एउटा ठुलो बाल्टीमा एक थोपा मात्रै हो भन्छन संरक्षणवादीहरू भने । तिनका भनाईमा त्यति रकम त बाघका वासस्थानहरू मासेर खेती गरिने फलफूलको न्युन मात्रा बिक्री गरेर आउने जतिपनि होइन ।
जिब्रोले सास फेर्ने कछुवा
मानव जातीले जिब्रो केका लागि प्रयोग गर्छ ? खाना चाख्न, स्वाद पत्ता लगाउन र गन्ध जााच्न । तर खाना चाख्न र गन्ध वा वासना पत्ता लगाउन नभएर एक खाले कछुवाले पानी भित्र सास फेर्नपो प्रयोग गर्ने रहेछ । कमन मस्क टर्ट ९अommयल mगकप तगचतभि० भनिने कछुवाहरूको पानी मुनीको आनीबानी गहिरिएर हेर्दा हालसालै वैज्ञानिकहरूले यो तथ्य पत्ता लगाएका हुन । धेरै कछुवाहरूको मुखमा एक भाग हुन्छ जसले प्राणवायू -अक्सिजन) लाईर् वरिपरिको पानीबाट तानेर लिन्छ ।
तर कमन मस्क टर्ट भनिने यि कछुवाहरूले भने जिब्रोबाटै अक्सिजन लिने रहेछन । ‘जलचरहरूले पानीमा अक्सिजन लिने अंग कहिा न कहिा हुन्छ भन्ने त हामीलाईर् थाह थियो, हामीले त्यसैको खोजि गर्दा अकर्मात पत्ता लगायौं’ अनुसन्धानमा संलग्न अष्ट्रियाको भियना विश्व विद्यालयका अनुसन्धानदाता इगोन हाईस ले भने ।
उनीहरूले कसरी पत्ता लगाए त यो ? कछुवाका बच्चाहरूले पानी बाहिर आएर आहारा समातेको अवलोकन गरे । ’cause कछुवाहरूले पाखामा कहिल्यै पनि आहारा नखाने भएकोले तिनले आहारालाईर् घसार्दै पानीमा लैजान्छन । त्यो गतिबिधि नियाल्दा तिनले मुख र जिब्रो कसरी चलाउाछन, कसरी खान्छन भनेर नजिकबाट बुझ्न सहयोग मिल्यो । उनीहरूले के पनि पत्ता लगाए भने, कमन मस्क टर्टको सानो र कमजोर हुने रहेछ जिब्रो पनि । त्यो जिब्रोको भाग पापीलाई ९उबउष्ििबभ० भनिने केही उठेका साना कोषहरूले ढाकिएको हुने रहेछ । तिनै कोषहरूले नै यि कछुवालाईर् अक्सिजन तान्न सहयोग गर्ने रहेछन । वैज्ञानिकहरूका अनुसार हुनत पापीलाई भनिने कोष मानिसमा पनि हुन्छन । तर हाम्रो पापीलाईले भने पूर्णरूपमा फरक काम गर्छ । ति स्वाद पत्ता लगाउन प्रयोग हुन्छन ।
माछाको भोक हड्ताल
चीन । के माछा पनि प्रेम गर्छन् ? एकछिन आˆनो प्रेमीलाई नभेट्दा, नदेख्दा उनीहरूलाई पनि छटपटी हुन्छ होला ? के माछामा पनि मान्छेमा झाै माया गर्ने मुटु हुन्छ ? माछा पनि प्रेम गर्छन्, आˆनो प्रेमीसाग छुट्टनिुपर्‍यो भने मान्छेझैा झोक्राएर बस्ने अनि भोक हड्ताल पनि गर्छन् भन्ने कुरा पत्याउन मुस्किल छ । तर, चीनको हेनान प्रान्तको एक व्यक्तिको घरमा रहेको एक्वेरियमभित्रका एक जोडी माछाले अचम्मको प्रेम देखाएका छन् । उनीहरूबीचको प्रेम देखेर माछा पनि प्रेम गर्छन् भन्ने कुरा पत्याउन करै लाग्छ　। एक्वेरियमभित्रका ती जोडी माछाबीचको प्रेम हेर्न टाढा-टाढाबाट मान्छे आउने गरेका छन्　। उनीहरूबीचको प्रेम कहानी मान्छेको भन्दा कम छैन　। एक्वेरियम मालिकका अनुसार ती दुई माछा केही समयअघि ताइवानबाट ल्याइएका थिए । ती मालिकले एक्वेरियममा रहेका ती दुई माछालाई केही दिन छुट्टाछुट्टै एक्वेरियममा राखेका थिए　। जब ती दुई माछालाई छुट्टयाएर राखियो तब ती दुवै माछाले चारो खानै छाडे　। दुवै माछाले तीन दिनसम्म चारो नखाएपछि ती मालिक बाध्य भएर उनीहरूलाई एउटै एक्वेरियममा हाल्न बाध्य भएका थिए　।
एउटै एक्वेरियममा हालेपछि दुवै माछाले एकअर्काको चुम्बनमा लिप्त भएका थिए । मालिकका अनुसार माछाको जोडीले निरन्तर आधा घण्टासम्म एकअर्काको मुख जोडेर चुम्बन गरिरहेका थिए　। अचेल माछाको जोडी हरेक समय चुम्बनरत हुने गरेका छन्　। माछा-माछाबीचको प्रेम हेर्न नवविवाहितदेखि प्रेमीप्रेमिकासम्मको भीड लाग्ने गरेको छ　। माछाको प्रेम देखेर मान्छे भावुक हुने गरेका छन्　।
बैंक लुट्ने दिन शुक्रबार
चोरले चोरी गर्ने बार चयन गर्छ ? सुन्दा अचम्म लाग्छ । तर, अमेरिकामा प्रकाशित एउटा रिपोर्ट हेर्दा त्यो प्रमाणित हुन्छ । अमेरिकाको एक सरकारी प्रतिवेदनमा बैंक लुटेराले शुक्रबार बिहानीपख बढी लुट्ने गरेको देखिएको छ । दक्षिणी र पश्चिमी राज्यतिर बढी बंैक लुटिने गरेका छन् । अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी एफबिआइका अनुसार लुटेराहरूले चार करोड तीस लाख देशभरबाट लुटेका थिए । दक्षिणी राज्यमा एक हजार सात सय नब्बे बैंक लुटिएका छन् भने पश्चिममा एक हजार ६ सय ९१ । क्यार्लिफोर्नियामा सबैभन्दा बढी आठ सय पााच बैंक लुटिएको थियो । समग्रमा ५ हजार ६ सय २८ बैंकिङ अपराधका घटना भएका छन् जसमध्ये ५ हजार ५ सय ४६ त बैंक लुटेका घटना छन् । तर, यो संख्या २००९ मा भन्दा कम हो ।
जीमखानामा नाङ्गै ब्ययाम
सोझो पाराले नभएपछि मानिसले अब पैसा कमाउनको लागि जे पनि गर्न तयार भएका छन् । आर्थिक मन्दिका कारण व्यापार-व्यवसाय चौपट बनिरहेको बेला स्पेनको बास्क इलाकाको एक जिमखानाले ग्राहकहरूलाई आकषिर्त गर्न नौलो तरिका अपनाएको छ । यस जिमखानामा न्युडिस्ट अर्थात् नग्नतावादी मानिसहरूलाई नाङ्गै शारीरिक अभ्यास गर्ने सुविधा रहेको छ । स्वस्थ रहनका लागि नाङ्गो हुन छूट दिने अरिगोरिएगास्थित यो पहिलो जिमखाना हो । ‘मन्दीले गर्दा आजभोलि जिम आउने ग्राहकहरू निकै कम छन्,’ जिम सञ्चालिका मार्कलसेकाले बताइन्, ‘म आफैामा नग्नतावादी होइन तर यसमा मेरो कुनै आपत्ति छैन । यो सेवाको उद्देश्य पैसा आर्जन गर्ने नै हो ।’ ‘इजी जिम’ खोल्नुअघि भने यथेष्ट अनुसन्धान गरिएको थियो । स्थानीय दुई स्विमिङ पुलले पनि न्युडिस्टहरूका लागि मासिकरूपमा नाङ्गै स्विमिङ गर्न सुविधा दिादै आएको छ । साथै हरेक वर्ष सामुदि्रक तटमा नाङ्गो दौड प्रतियोगिता समेत आयोजना गर्ने गरेको छ । बास्क क्षेत्रमा दर्जनभन्दा बढी यस्तो तट रहेको छ भने देशभर झन् धेरै रहेको पाइन्छ । ‘म सधैा नयाा र अनौठो कार्य गर्न उत्साहित हुन्छु,’ जिमको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएका बास्क नेचुरिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष मैते बैक्युनाले भने, ‘कपडाबिना व्यायाम गर्ने प्राकृतिक हो अनि सुविधाजनक पनि हुन्छ ।’ जिमको समर्थनमा ९० प्रतिशत मत आएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । यद्यपि नाङ्गो व्यायाम गर्ने सुविधा दिनु गलत हो भन्दै यस किसिमको जिमप्रति रुष्ट हुनेहरूको संख्या पनि कम छैन । कुनै पनि खेल वा व्यायामका लागि अन्डरवयर बनाइएको हुनाले नग्नता प्रदर्शन गर्ने उचित नहुने उनीहरूले बताएका छन् । ‘संसारमा हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र छन् तर नग्न हुनु अस्वास्थ्यकर चीज हो,’ बिलबाओका एक परम्परागत जिम सञ्चालकले बताए, ‘नाङ्गो रहादा शरीरको पसिना कपडाले सोस्न नपाउने हुादा पसिना मेसिना, भुइा वा नजिकैको व्यक्तिमा जान्छ ।’ तैपनि नाङ्गै व्यायाम गर्न मिल्ने आˆनो जिम अव्यवहारिक नभएको जिम सञ्चालिकाले बताइन् । उद्घाटनको दिनमै केबल चारजना मात्र ग्राहक आएपछि यस व्यवसायबाट धेरै पैसा कमाउने उनको सपना भने बिपना बन्न मुस्किलै छ ।
वीर्य उत्पादन घटाउाछ सˆट डि्रक्सले
गर्मी बढ्न थालेपछि चिसो पेय सबैका पि्रय बन्न थाल्छन्　तर दैनिक एक लिटर जति कोकाकोला पिउने पुरुषको वीर्य कमी भएको अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ । महिला, पुरुष र बालबालिका सबैको रोजाइमा पर्छ कोल्ड डि्रक्स　। खाादा मीठो भए पनि सˆट डि्रक्स अस्वस्थ्यकर हुने विभिन्न अध्ययनले देखाउादै आएका छन्　। एक अध्ययनअनुसार दैनिक एक लिटर जति कोला पिउने पुरुषको वीर्य उत्पादनमा नकारात्मक असर गर्छ । डेनमार्कमा गरिएको सो अध्ययन अनुसन्धानकर्ताका अनुसार दैनिक एक लिटर कोला पिउने पुरुषको वीर्य उत्पादनमा ३० प्रतिशतले कमी आउाछ　। थोरै वीर्य उत्पादन हाुदा पुरुषको सन्तानोत्पादन क्षमतामा असर पर्छ । अनुसन्धानकर्ताले कोलाले पुरुषको प्रजनन स्वास्थ्यमा गर्ने असर’boutमा अध्ययन गरेका थिए　। अध्ययनमा दुई हजार पााच सय पुरुषलाई सहभागी गराइएको थियो　। अनुसन्धानमा सˆट डि्रक्स नपिउने पुरुषको वीर्यको स्तर उच्च भएको पाइयो　। कोला नपिउने पुरुषको प्रत्येक मिलिलिटर सिमनमा पााच करोड वीर्य भेटियो　। कोला नपिउने पुरुषको जीवनशैली पनि स्वस्थकर भएको अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ　। तर, यता दैनिक एक लिटरजति कोला पिउने पुरुषको वीर्य कमी भएको अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ　। दैनिक कोला पिउने पुरुषको प्रत्येक मिलिमिटर सिमनमा जम्मा तीन करोड ५० लाख वीर्य मात्र पाइएको अनुसन्धाताले बताएका छन्　। यसैगरी, अत्यधिक कोला पिउने पुरुषको जीवनशैली पनि अस्वस्थकर रहेको पाइएको छ　। उनीहरूले धेरै फास्टफुड खाने, थोरै फलफूल र हरियो तरकारी खाने गरेको पाइएको छ　। कोला लगायत सˆट डि्रक्समा पाइने क्याफिनले पुरुषको वीर्यको गुणस्तर न्यून बनाउने सम्बन्धमा अहिले ठोकुवा गर्ननमिल्ने अनुसन्धानकर्ता डा. टिना कोल्ड जेनसन बताउाछिन्　। क्याफिनले पुरुषको प्रजनन स्वास्थ्य’boutमा गर्न असर’boutमा ज्यादै थोरै अध्ययन भएकाले क्याफिनलाई यसको सम्पूर्णदोष दिन नमिल्ने उनको तर्क छ　।
त्यसैले यससम्बन्धमा थप अध्ययन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ　। ‘तर, अत्यधिक कोला पिउने पुरुष अन्य पुरुषको तुलनामा धेरै फरक रहेको हामीले अनुसन्धानमा पायौा,’ कोपेनहेगन स्थित रिग्स हस्पिटलकी चिकित्सक टिना भन्छिन् । यस अनुसन्धानको प्रतिवेदन अमेरिकन जर्न अफ इपिडिमियोलोजीमा छापिएको छ　। कोलासहित अन्य सˆट डि्रक्सले पुरुषको वीर्यको उत्पादन र गुणस्तरमा मात्र कमी ल्याउादैन　। यसले मोटोपना, चिनी रोगजस्ता थुप्रै रोग निम्त्याउने अनुसन्धानले पत्ता लगाएका छन्　।
१९९८ मा अमेरिकाको सेन्टर फर साइन्स इन पब्लिक इन्ट्रस्टले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन ‘लिक्विड क्यान्डी ः हाउ सˆट डि्रक्स आर हार्मि अमेरिकन्स हेल्थ’ मा बच्चाद्वरा सˆट डि्रक्सको उच्च सेवन र यसले स्वास्थ्यमा पार्ने अवसर’boutमा उल्लेख गरिएको छ　। सˆट डि्रक्स धेरै सेवन गर्ने बच्चाको दाात सडने, पोषणको कमीबाट हुने रोग लाग्ने, मोटोपना र मुटु रोग लाग्ने जोखिम बढी हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ　। सˆट डि्रक्सको बढदो प्रयोग घटाउन पनि प्रतिवेदनले आग्रह गरेको छ　।
अमेरिकामा पााच सय ४८ स्कुले विद्यार्थीलाई १९ महिना लगाएर गरिएको अध्ययनअनुसार कोला लगायतका सˆट डि्रक्सले शरीरको मोटाइ बढाउाछ　। अध्ययनअनुसार बच्चाले दैनिक लिने हरेक सˆट डि्रक्सले ० दशमलव २४ केजी तौल बढाउाछ　। अमेरिकी बालबालिकामा रहेको उच्च मोटोपनाको कारण सˆट डि्रक्सलगायत फास्टफुड र जंकफुडको अत्यधिक सेवन मानिएको छ　। यसैगरी, सˆट डि्रक्स र मोटोपना सम्बन्धमा आठ वर्षलगाएर ५० हजार महिला नक्सा अध्ययन गरिएको छ　। अध्ययनअनुसार दैनिक सˆट डि्रक्स पिउने महिलाको तौल अध्ययन अवधिमा आठ केजी बढयो　। तर, कहिलेकाहीं मात्र पिउने वा सˆट डि्रक्स पिउन कम गर्दै लगेका महिलाको तौल आठ वर्षमा केवल २ दशमलव आठ केजी मात्र बढेको पाइयो　।
विश्वकै मोटी महिला बन्ने सपना
आजभोलि युवतीहरु जिरो फिगर भनेपछि हुररुक्कै हुन्छन । मोटोपनासागै शरीर भद्दा देखिने हुादा सुन्दरी बन्ने होडमा युवतीहरु डाइटिङ्ग गर्न तथा अन्य खाना ब्यवहारमा सतर्कता अपनाउछन । तर फेसन र जिरो फिगरको जमानामा अपवाद बनेकी छिन अमेरिकी महिला डोना सिम्पसन । उनी अहिले संसारकै मोटी महिला बनेर नाम कमाउने कसरतमा छिन ।
न्यूजर्सी बस्ने ४३ वषर्ीय सिम्पसन आˆनो वजन २७३ बाट बढाएर ४५९ किलो बनाउन प्रत्येक दिन खानपिनमै ब्यस्त छिन । आˆनो मनपर्ने जापानी ‘डिससुशी’ उनले दिनको ७० प्लेट खाने गरेकी छिन । जसबाट झण्डै १२ हजार क्लोरी शक्ति मिल्दछ । एक होटेलमा शेफको काम गर्ने पहिलो श्रीमानबाट बढी खाना खाने आदत बसेको उनले बताइन ।
उनका श्रीमानले बचेखुचेका सबै खाना घरमा ल्याउने गर्दछ । केही वर्षपछि उनले वजन घटाउन प्रयास पनि गरिन । फलस्वरुप ३० केजी कम पनि भयो । बढ्दो तौल कम गर्न अपरेसन गर्ने विचार पनि उनलाईर् आएको थियो । तर पछि उनले यो बिचार त्यागिन । कारण थियो- यस्तै अपरेसनमा उनको एक साथीको मृत्यु भएको थियो । यसले उनलाईर् मोटो बनेर चर्चा कमाउन प्रेरित गर्‍यो ।
२००६ मा अनलाईन च्याटबाट सिम्पसनले फिलिप गुआम्बासाग मित्रता गासेकी थिइन, जो पछि उनको व्वाइप|mेन्ड बने । ६ फिट ४ इन्च र ८२ केजी तौल भएका फिलिपसागको सम्बन्धका कारण उनी गर्भवती पनि बनिन । बच्चा नजन्माउन डाक्टरले दिएको सुझाब बेवास्ता गर्दै उनले २००७ मा छोरीलाईर् जन्म दिई विश्वकै मोटी आमा बनिन । अब उनको सपना छ विश्वकै सबैभन्दा मोटी महिला बन्ने ।
चन्द्रमामा घर बनाइने
हामी पो दिनभरी मारमुग्री, कुटाकुट र लखेटा लखेटमा ब्यस्त छौं त । अनि भएका बाटाघाटा, सडक भत्काउन र बाटाका बत्ती फुटाउनै हतारो छ । अरु देशका मानिस भने जल र थलमा पनि नपुगेर, पृथ्वीमा पनि निकै सकेर चन्द्रामामा के छ भनेर खोजि गरिरहेका छन । पृथ्वीको जल र जमिनले नपुगेर अरु ग्रहमा पानी, हावा र माटो पाए त्यहाा पनि वस्ती बसाल्न हुन्थ्यो कि भन्ने दाउमा अनुसन्धान गरिरहेका छन । निकै समयदेखि चन्द्रामामा के छ भनेर खोजि गरिरहेका वैज्ञानिकहरुले अहिले पानी फेला पारेको दाबी गरेका छन । हाम्रो देशमा बन्द र हड्तालले चर्चा पाए झैं विकसित देशहरुमा यो खबरले निकै चर्चा पाइरहेको छ । त्यसको तथ्य अझ बढी पत्ता लगाउन त्यहाा घरनै बनाएर बस्न सक्ने औंल्याएका छन । यो तथ्य अमेरिकी बैज्ञानिक संस्था नासाका बैज्ञानिकहरुले सार्वजनिक गरेका हुन यही महिनाको दोस्रो साता । उनीहरुले त्यहाा पानीको मात्रा निकै भएको दाबी समेत गरेर नयाा आसा बााडेका छन न वस्तीनै बसाल्न सकिन्छ कि भनेर । यसले कम्तिमा नयाा अनुसन्धानकर्मीका लागि नयाा बाटा र आसा खोलेको छ । अब बैज्ञानिकहरुको टोलीले लुनारको बाहिरी आवरणमा घरनै बनाएर बस्ने र अनुसन्धान गर्नसक्ने सम्भावना बढेको छ । चन्द्रमाको त्यो पानी करोडौं करोड वर्षअघिदेखि हिउाको रुपमा जमेर बसेको हुनसक्ने अडकल बैज्ञानिकहरुको छ । यसले सौर्यपद्दतीको ईतिहासमै रेकर्डकायम राख्न सक्ने औंल्याइएकोछ । द न्युयोर्कटाईम्सका अनुसार एल क्रस ९ी-ऋचयकक० नामको भूउपग्रह करिब एक महिना अघि चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुव नजिक पुगेको थियो । त्यति बेला त्यसले चन्द्रमाको त्यो भागमा धक्का दिएको थियो । त्यसले धक्का दिादा ६० देखि १०० फिट फराकिलो हुने गरी त्यहााको जमिनलाईर् बजार्‍यो । त्यही बेला २४ ग्यालेन जति पानी निस्कियो । त्यसपछि उनीहरुले त्यो पानीलाईर् त्यत्तिकै नछोडेर त्यसको प्रभाव के हुन सक्छ भन्नेपनि परिक्षण गरेको बताएका छन । एक दशक भन्दा अघि देखि सौर्यबैज्ञानिकहरुले सूर्यको किरण कहिल्यै नपर्ने चन्द्रमाको त्यो भागमा हिम संकेत देखेका थिए । त्यसपछि निरन्तर त्यसको खोजीमा लाग्दा अहिले त्यसको पुष्टि गर्नसफल भएका हुन ।
नेपाल, भारत, भुटान, पाकिस्तान लगायत दक्षिण एशियाली मुलुकमा त छोरा पाउन मरिहत्ते गर्छ नै । जतिसुकै बिकसित भनेपनि पश्चिमी मुलुकमा समेत अहिलेसम्म छोरा पाउन चाख राख्नेको संख्यानै तुलनात्मक रुपमा बढि छ । तर थुप्रै चराका जाती भने भाले भन्दा पोथी पाउनकै लागि मरिहत्ते गर्ने रहेछन ।
हुनत बैज्ञानिकहरुलाईर् थाहा थियो कि सेसिल वाब्लर -फिस्टे चरा), जेब्रा फिन्च -भागेरा, बगडी समूदायको चरो) र टि्र स्वालो -गौंथली) ले किन आˆना बचेरा कोरलिनु पहिले चतुर्‍याइा पूर्व चालबाजी गर्छन भनेर । अधिकांश बैज्ञानिकहरुले अहिलेसम्म टेस्टोस्टोरन हर्मनको अनुसन्धान गर्ने गरेका रहेछन । अधिकांश बैज्ञानिकहरुले अहिले सम्म टेस्टोस्टोरन हर्मनको मात्रै प्राथमिकताकासाथ अनुसन्धान गर्ने गरेका रहेछन । तर अहिले कोर्नल विश्व विद्यालयका अनुसन्धानदाताहरुले भने प्रोजेस्टोरोन भनिने हर्मनहरुको अनुसन्धान गरेका थिए । यो अनुसन्धानबाट के पत्ता लाग्यो भने पोथीहरुले पोथी कोरल्नका लागि प्रोजेस्टोरोन हर्मन कम छोड्ने रहेछन फूल बन्ने प्रारम्भिक चरणमा । उनीहरुले कि त प्रोटेस्टेरोन हर्मन बढि लगानी गरिदिने गर्ने रहेछन । त्यसो गर्दा पोथीहरु बढि कोरलिने रहेछ ।
अनुअसन्धाबाट के पत्ता लागेको छ भने जति कम प्रोजेस्टोरोन हर्मन लगानि गर्‍यो उति भालेको संख्या कम हुने रहेछ । प्रोजेस्टेरोन फूल बन्ने बेलामा पोथीले मुख्यरुपमा आफैंले लगानी गर्नसक्ने हर्मन हो । ति चराहरुले किन पोथी बढि कोरल्न खोज्छन त ? बैज्ञानिकहरुका अनुसार आˆनो वासस्थानमा जहाा आहाराको संकट बढि हुन्छ त्यहाा पोथीहरुले त्यस्तो गर्छन । भालेहरुले भन्दा पोथीले अर्को बेतका बचेराहरुलाईर् आहारा खोज्न बढी सहयोग गर्ने हुनाले पोथीहरुले पोथीहरु बढी पक्षपाती ब्यवहार गरेको हुन सक्ने बताएका छन ।
एउटा अर्को तथ्य के पनि हो भने स्तनधारी जीवहरुमा भाले वा पोथी के जन्मन्छ भन्ने भालेको शुक्रकिटमा भर पर्छ । तर चराहरुमा भने पोथीको क्रोमोजोमले निर्धारण गर्छ भाले वा पोथी बन्नेमा ।
मोटी हुनुहुन्छ ? घट्ने भो स्मरणशक्ति
मोटी महिला देख्दा पहिले पहिले खाइलाग्दो, स्वस्थ ठानिन्थ्यो । ड्याम्मको खाइ लाग्दो छ शरीर । हि्रस्टपुस्ट छे । पातलो शरीर देखेपछि खाने बेलामा लखेटे जस्तो भन्नेहरु अझैपनि प्रशस्तै भेटिन्छन । भारतका कतिपय ठाउामा अझैपनि भुाडी लागेको, मोटो शरीर भएकालाईर् सम्पन्न, सुख पाएको, दाम भएको ठानिन्छ । तर अहिले ? शरीर धेरै मोटाउादा विभिन्न खाले रोग लाग्न सक्ने डर त छादैछ, वैज्ञानिकहरुको अध्ययनले भने मोटा मान्छेको स्मरण शक्ति कमजोर हुन्छ भन्ने पत्ता लागेको छ ।
वैज्ञानिकहरुले विभिन्न मानिसको स्मरण शक्ति परीक्षण गर्दा शरीरमा थोरै मात्रामा मोटोपन वृद्धी हुादै जाादापनि त्यसैका अनुपातमा स्मरण शक्ति ह्रास हुने पत्ता लाग्यो । अर्थात शरीरमा हुने मोटोपनको एकाई ‘बडी मास ईन्डेक्स’ -बि एम आई) को मात्रा जति वृद्धी हुन्छ त्यसैको अनुपातमा स्मरण शक्ति ह्रास हुने रहेछ । धेरै मानिसहरुलाईर् उच्च कोलेस्टोरेल, मुटुको रोग, क्यान्सर, रक्तचाप का ’boutमा जानकारी थियो जुन मोटोपनसित सम्बद्ध हुन्छ । तर मोटोपनले स्मरण शक्ति नास घटाउाछ भन्ने जानकारी चाहिा थिएन । यो हालसालै भएको नयाा अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको हो ।
यो तथ्य पत्ता लगाउन अमेरिकाको नर्थ
वेस्टर्न विश्वविद्यालय र पिटर्स बर्ग विश्वविद्यालयका केही अनुसन्धानकर्मीहरुले ८,७४५ महिलाहरुमाथि परीक्षण गरेका थिए । ती महिलाहरु ६५ र ७९ वर्ष उमेरका थिए । ती सबैलाईर् केही प्रश्नहरु दिईएको थियो जसमा तिनको दैनिक खानपान, स्वास्थ्य अवस्था र समग्ररुपमा जिउने तरिका’bout सोधिएको थियो । परीक्षण पछि मोटोपन बढ्दै जाादा स्मरण शक्ति ह्रास हुादै जाने पत्ता लाग्यो ।
अनुसन्धानबाट केपनि पत्ता लाग्यो भने कम्मरको तुलनामा पुट्ठामा भएको बढि मोटो पनले तुलनात्मकरुपमा बढी स्मरणशक्ति घटाउाछ । तर मोटोपनले कसरी दिमागको कार्यप्रणालीलाईर् प्रभाव पार्छ भने चाहिा वैज्ञानिकहरुले स्पष्ट बुझ्न सकेका छैनन । तर उनीहरुले के आशंका गरेका छन भने बढि मोटाउादा त्यसले शरीरको रागरस -हर्मन) को मात्रालाईर् प्रभावित गर्छ र त्यसले दिमागलाईर् प्रभावित गर्छ । उनीहरुले के पनि आशंका गरेका छन भने अनावश्यक रुपमा मोटाउादै जाादा त्यसले समग्ररुपमा सम्पूर्ण भागलाईर् नै प्रभावित पार्छ ।
प्रेस्त्रिmप्सन फर न्युटि्रस्नल हेलिङ भन्ने स्वास्थ सम्बन्धि पुस्तकका लेखक फिलिस ए बाल्चका अनुसार यसरी मोटाउादै जानुको कारण कमजोर पोषण, खानपानको बानी र तरिका अनि व्यायामको अभावलाईर् औाल्याएका छन । बजारमा तयारी अवस्थामा किनेका खानेकुरा नखाने, खानपानको तरिकामा परिवर्तन गर्ने र नियमित अतिरिक्त शारीरिक व्यायाम गर्ने हो नियन्त्रण गर्न सकिने बताएका छन ।
१ सय ५० बर्षपहिला लुटेको किताव फिर्ता
प|mान्सेली सेनाले करिव एक सय ५० वर्षअघि दक्षिण कोरियाबाट लुटेका महत्वपूर्ण किताव फिर्ता गरेको छ । गएको वर्ष दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति लि मुयाक बाक र प|mान्सका राष्ट्रपति निकोलस सार्कबीच सो किताव फिर्ता गर्नेसहमति भएको थियो ।
ऐतिहासिक रुपले महत्वपूर्णमानिने सो किताव सन १८६६ मा प|mान्सेली सेनाले काङवा दिपको पश्चिमी कोरियाली प्रायद्धिपमा आक्रमण गरेर लुटेको थियो । ३ सय भागमा रहेको सो कितावका केही पुस्तक फर्काए पनि बांकि कितावहरु अर्को महिना मात्र फर्काइने भएको छ । लुटिएका किताव फिर्ता हुनु ऐतिहासिक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै दक्षिण कोरियाका संस्कृति मन्त्री चो बोयोङ गुगले यसलाईर् चोरिएको संस्कृति फिर्ता भएको संज्ञा दिनुभएको छ ।
रौ उम्रने ढुङ्गा
मानिस, जनावरलगायत अन्य पंक्षीहरूको शरीरमा रौा आएको त देखेको, सुनैकै हो । शरीरको सुरक्षा कवजको रूपमा काम गर्ने रौा प्रकृतिले प्राणीहरूलाईर् दिएको एक बरदान नै हो । तर के ढुङ्गाजस्तो निर्जिव वस्तुमा पनि रौा पलाउन सक्ला ? धेरैलाईर् विश्वास पनि नलाग्ला कि रौा उम्रने ढुङ्गा पनि हुन्छ । चीनको एक तटीय क्षेत्रमा हालै रौासहितको ढुङ्गा भेटिएको छ । बाहिरबाट झट्ट हेर्दा गिट्टी आकारको देखिने यस किसिमको रकलाईर् वैज्ञानिकहरूले ‘कपाल उम्रने ढुङ्गा’ नाम दिएका छन् । चिल्लो र गोलाकार रहेको यस ढुङगा र रौाको रङ्ग उस्तै खैरो रहेको छ । मानिसको भन्दा अलि खस्रो रहेको ढुङ्गाको रौा १५ सेन्टिमिटर -६ इन्च) रहेको र अहिलेकै अवस्थामा कायम भएमा अझै बढ्दै जाने विज्ञहरूले बताएका छन् । यद्यपि, संसारमा रौा भएको यो ढुङ्गा पहिलो भने होइन । यसअघिनै रौा युक्त यस्तै खाले दुई ढुङगा ताइवानको संग्राहलयमा राखिएको छ । अद्भूत प्रकृतिको उक्त ढुङ्गालाईर् हाल बेजिङको जोङगुवान गाउास्थित फेसन रक भवनमा प्रदर्शनीको लागि राखिएको छ । ढुङ्गा ३० से.मी. लामो, २० से.मी. चौडा र १५ से.मी. अग्लो रहेको छ । निर्जिव वस्तुमा पनि रौा आउनु प्रकृतिले विज्ञानलाईर् दिएको ठाडो चुनौति हो । यस रहस्यले वैज्ञानिकहरूलाईर् फेरि गहन अध्ययन गर्न बाध्य बनाएको छ ।
लि· काटेर संग्रहालयमा
आइसल्याण्डका पल अरसनले आˆनो जीवनभर चर्चामा आउन कुनै कसुर बााकी राखेनन् । तर भाग्यले साथ नदिएपछि के लाग्छ र ? बाचुञ्जेल नाम कमाउन नसके पनि मरेपछि सबैले सम्झने काम गरेका छन् । विभिन्न जनावरहरूको अनौठो लिङ्गहरू संग्रह गरिएको हुसाभिक शहरस्थित संग्रहालयलाईर् मृत्युपर्यन्त आˆनो लिङ्ग दान गर्ने घोषणापछि ९५ वषीर्य अरसन चर्चा बटुल्न सफल भएका थिए । यसअघि नै संग्रालयमा हृवेल, भालुलगायत अन्य स्तनधारीहरूको लिङ्ग प्रदर्शनीका लागि राखिएको छ । अरसनको लिङ्गसागै संग्रालयले पूर्णरूप पाएको संचालक जरतसनले बताए । ‘१५ वर्षदेखि म अरसनलाईर् प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको थिएा,’ जरतसनले एक टेलिफोन वार्तामा भने । जनवरी ५ मा मृत्यु भएपछि डाक्टरद्वारा अरसनको लिङ्ग सर्जरी गरी झिकिएको थियो । उनको लिङ्ग दान अहिलेसम्मकै पहिलो घटना हो । स्वभावैले मानिस अरुको सिको गर्ने प्रवृतिका हुन्छन् । अरसनको यो हर्कतपछि अमेरिकी, बेलायती र जर्मनलगायत अन्य धेरैले मृत्युपछि आˆनो लिङ्ग दान गर्ने इच्छा जाहेर गरेका छन् । सबैभन्दा लामो स्पर्महृवेलको लिङ्ग ६७ इन्च रहेको छ । सहरको पर्यटन उद्योग प्रवर्द्धनमा उक्त संग्रहालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । प्रत्येक गृष्म ऋतुमा हजारौा पर्यटकहरू संग्रहालय भ्रमणमा आउने गरेको तथ्याङ्क छ । आफू सानो छादा साथीभाइले हृवेल, सााढे आदिको लिङ्गका आकृतिहरू उपहार दिएकाले ग्यालोलोजिकल म्युजियम संचालन गर्न प्रेरित गरेको जरतसनले बताए । ‘६२ लिङ्गसहित मैले यो संग्रहालय १५ वर्षअघि खालेको थिएा,’ उनले भने, ‘अहिले २७६ लिङ्गका आकृतिहरू छन् ।’ पहिलो मानव लिङ्ग संग्रहालयमा राखिएपछि पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुने उनले आशा गरेका छन् ।
शिक्षिकाको नग्न तस्विरले विद्यार्थीमा तहल्का
विद्यार्थीहरूलाईर् आˆनो शिक्षकको हरेक कुराले आकषिर्त गरेको हुन्छ । आफूलाईर् पढाउने शिक्षक/शिक्षिकाको बोल्ने, हिाड्ने, खानेदेखि लिएर अन्य धेरै कुराले विद्यार्थीहरूको ध्यान खिचेको हुन्छ । भनिन्छ धेरै विद्यार्थीले त आˆनो शिक्षक/शिक्षिकाको दुरुस्त नक्कल गर्छन्, विशेषगरी साना केटाकेटीहरूले । शरीरको माथिल्लो भाग नाङ्गो रहेको आˆनो शिक्षिकाको निकै कामुक र सेक्सी तस्विर भेट्टाएपछि स्कुलका विद्यार्थीहरूलाईर् अरु के चाहिन्थ्यो र Û बेलायतको एक नामी स्कुलमा आर्ट पढाउादै आएकी एक शिक्षिकाको अर्धनग्न तस्विर विद्यार्थीहरूले फेला पारेपछि तहल्का मच्चिएको छ । स्कुलकै चौर र आर्टुममा सहकर्मी साथी वा ब्यवसायिक फोटोग्राफरले उक्त तस्विर खिचेको बुझिएको छ । स्कुलको फोटोग्राफी ल्याबमा फेला परेको तस्विर विद्यार्थीहरूले आˆनो मोबाइलमा मात्र राखेनन्, साथीहरूको मोबाइलमा समेत पठाइ दिएका छन् । स्कुलका किचन स्टाफदेखि पि्रन्सिपलसम्मले उक्त नग्न तस्विर देखेपछि घटना’bout छानबिन सुरु भएको छ । विद्यार्थीहरूलाईर् तस्विर मोबाइलबाट डिलिट गर्न विद्यालय प्रशासनले सूचना दिएको छ भने कसैलाईर् म्यासेज गरी पठाइएको थाहा पाइएमा दोषी विद्यार्थीलाईर् निष्काशन समेत गरिने चेतावनी दिएको छ । नाङ्गो तस्विर खिचााउदा लाज नमानेकी तर विद्यार्थीले गोप्य कुरा थाहा पाएपछि आˆनो प्रतिष्ठामा आाच आएको महसुस गरेकी शिक्षिकाले उक्त स्कुलमा आर्ट नपढाउने बताएकी छिन् । आर्ट टिचरको तस्विरमा फोटोग्राफरको पूरा कपीराइट -प्रतिलिपी अधिकार) रहेको र यसलाईर् सुटुक्क चोरी गरिएको भन्दै पि्रन्सिपलले शिक्षिकाको समर्थनमा उभिएका छन् । यसले अरु शंका उब्जाएको छ । कतै पि्रन्सिपलले नै उक्त फोटो त खिच्न लगाएनन् ? यो त छानबिनपछि थाहा हुनेछ । अपराध जसले गरेको भए पनि एक असल शिक्षिकाको यस्तो नग्न तस्विर बाहिर आउनुले विद्यार्थीहरूमा नकारात्मक सन्देश गएको छ ।
मौसमअनुसार रङ बदलिने तलाउ
पश्चिम अमेरिकाको पहाडी राज्य व्योमिङको येलोस्टोन नेशनल पार्कको मर्निग ग्लोरी पुलले संसार भरका मानिसहरूलाईर् आकषिर्त गरेको छ । समयसागै यसको रङ बदलिने गर्दछ । केही दशक अगाडिसम्म यो नीलो रङको थियो, अहिले यो हरियो रङमा परिवर्तन भएको छ । यसको चारैतिर पहेलो रङको घेरा बनेको छ । कैयन दशकहरूदेखि पर्यटकहरूले यस तलाउमा पैसा ˆयाकेर राम्रो इच्छा प्रकट गरी त्यसको कामना गर्दछ । यसरी तलाउमा पैसाहरू भरिन थालेपछि यसबाट गरम वाफ निस्कन छोडेको थियो, यसपछि यी पैसाहरू केमिकल रिएक्शन भएर त्यस तलाउमा कैयन प्रकारका बैक्टिरियाहरू उत्पन्न भएका थिए । यी बैक्टिरियाहरू तलाउको चारैतर्फ जम्मा भएपछि तलाउमा पहेलो घेरा देखिन थालेको थियो । अनि यही पहेलो रङ मिसिएको मानी हरियो रङमा बदलेको थियो । एल्गी फोटोसिंथेटिक तथा थर्माफिलिक बैक्टीरियाहरू ६४ देखी १०७ डिगि्र सेंटीग्रेडसम्मको तापक्रममा उम्लने गर्दछ । मानिसहरूले यस तलाउको ’boutमा सुनेर अच्चमित हुने गर्दछ, त्यसैले यहाा नसकै भीड लाग्ने गर्दछ । तर यहाा आउने मानिसहरूले उक्त तलाउमा ढुङ्गा, बोटल और कैन ˆयााक्ने गर्दछ, जसबाट यस तलाउको प्राकृतिकपना गुम्दै गइरहेको छ ।
कञ्चनपुरको लक्ष्मीपुर गाविस-२ चरघरुवाका ५० वषर्ीय फुलराम चौधरीले मुखले छालामा नदुखाइकनै दुई वर्षदेखि पत्थरी झिकेर बिरामीलाईर् उपचार गर्दै आइरहेका छन् । निःशुल्क रूपमा पत्थरी बिरामीलाईर् उपचार गर्दै आएका चौधरीले दैनिक ३० देखि ५० बिरामीलाईर् ठीक गर्दै आइरहेको उनले बताए । बिरामीलाईर् बजारबाट अल्ट्रासाउन्ड गर्नलगाएर पत्थरी भएको ठाउामा मुखले चुसेर निकालिएको पत्थरी बिरामीलाईर् नै देखाएर आश्चर्यचकित पार्दै आएका छन् । मुखले पत्थरी झिक्दा सामान्य दुखाइबाहेक बिरामीले कुनै हैरानी व्यहोर्नु पर्दैन । चुसेको ठाउाको छाला सामान्य रातो देखिने गरे पनि घाउ नहुने भएकाले बिरामीले पत्थरी झिकेको थाहा नै नपाउने गरेको पाइएको छ । फुलरामले पत्थरी निकाल्ने कार्य बाजे मनपारी चौधरीबाट सिकेको बताए । थारु समुदायले गाउामा भूतप्रेत भगाउन र गाउालाईर् रोगव्याधीबाट बचाउन नियुक्त गर्ने देशबन्धिया गुरुवासमेत फुलराम रहेका छन् । उनले भने- ‘कालीमाताको सिद्धि प्राप्ति भएकाले जस्तोसुकै बिरामीलाईर् पनि ठीक गर्न सक्दछु ।’ चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्न नमान्ने बुढापाका, महिला र रक्तअल्पता भएका बिरामीलाईर् प्राथमिकतामा राखेर उपचार गर्दै आएको उनले बताए । फुलरामले भने- ‘पत्थरीको पीडाले छटपटाउादै पुग्ने बिरामीको उपचारपछि ठीक भएर घर फर्केर जाादा आनन्दको अनुभूति हुने गरेको छ ।’ उनले बिरामीहरूका लागि भारतका विभिन्न ठाउाबाट झिकाइएका जडीबुटीका वालम खिरा, लिस्पिटी, बहिरालगायत बिरुवा रोपेर बिरामीहरूलाईर् जडीबुटीसमेत निःशुल्क रूपमा बााड्दै आएको बताए ।
स्विमिङ खेल्दा केटी गर्भती
एक जवान युवती गर्भवती हुन के हुनु वा गर्नपर्छ भन्ने तपाईं हामी अधिकांशलाईर् थाहा भएकै कुरा हो । प्राकृतिक यौनसम्पर्कबाट गर्भवती नभएकाहरू आजभोली टेष्टट्युव बेवी पनि जन्माउन थालेका छन । तर पोल्याण्डकी एक युवती भने तारे होटलमा स्वीमिङ खेल्दा गर्भवती भएकी छन, कुनै पुरुषसंगको संसर्गबिनै ।
फुर्सदको समयमा इजिप्ट घुम्न आएकी पोल्याण्डकी माग्डालेना क्विटकोस्का नाम गरेकी १३ वषर्ीय युवती एक स्विमिङ पुलमा पौडी खेलेपछि गर्भवती भएको उनकी आमाले दावी गरेकी छन । आˆनी आमासाग इजिप्ट घुम्न आएकी क्विटकोस्का स्विमिङ पुलमा तैरिएर रहेको पुरुषको विर्यका कारण गर्भवती भएको बुझिएको छ । कुनचाहिा पुरुषले पााचतारे होटलको पौडी पोखरीमा बिर्यछाडे भन्ने खुलेको छैन । होटेलको नाम पनि खुलाईएको छैन । केही दिनको घुमघामपछि घर फर्किएकी क्विटकोस्का अब चााडै आमा बन्ने भएकी छिन ।
भ्रमणका क्रममा आˆनी छोरीले कुनै पुरुष नभेटेको बताउादै आमाले उक्त होटेलविरुद्ध क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेकी छिन । छोरीले क्षतिपूर्ती त पाउलिन, तर नबशिशुको पिता कसलाईर् बनाउने हो यो भने अन्यौल भएको छ । आमाको रिटलाईर् वार्साको पर्यटक अधिकारीहरूले कानुनी कारबाहीको लागि अगाडि बताइएको छ ।
डोमेनले मञ्जुरी पायो
हहह)मomबष्ल पोर्नग्राफीसम्बन्धी सामग्री पस्कन वेभसाइटका लागि अलग्गै इन्टरनेट डोमेन नामले स्वीकृति प्राप्त गरेको छ । इन्टरनेट वेभसाइट नामको स्वीकृति दिने संस्था आइज्यानले ।अom र ।यचन जस्तै ।हहह दर्ता गर्नस्वीकृति प्रदान गरेको हो । यस विषयलाईर् लिएर गत दश वर्षदेखि विवाद चलिरहेको थियो । आइज्यानले गत वर्ष यस विषयमा सुरुवाती मञ्जुरी दिएको थियो तर यसमा अंकुश लगाउने प्रावधानलाईर् लिएर परामर्श चलिरहेको थियो । ।हहह लाईर् वास्तविकतामा बदल्नका लागि आइज्यान आइसीएमआर रजिष्ट्रिका साथ एउटा सम्झौता गर्ने छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यो डोमेन ।हहह नामबाट यस्ता सामग्री अलग गर्न सहयोग पुग्नेछ जुन अपयुक्त छैन । तर कयौा पोर्नग्राफरहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् कि यो डोमेन बनेपछि आˆनो सामग्री अलग-अलग हुनेछ वा ठप्प हुनेछ ।
यता धार्मिक संगठनहरूको भनाइ छ कि पोर्नग्राफी वेभसाइटलाईर् अलग डोमेन दिनु भएको उनीहरूलाईर् वैधता दिनु हो । इन्टरनेट वेभसाइटहरूको ठेगाना स्वीकृत गर्ने संस्था आइज्यानले ।हहह लाईर् स्वीकृति दिनुअघि भनेको थियो कि आइज्यानमा यो विषयलाईर् लिएर गहन छलफल भयो र सबैभन्दा बढी टिप्पणी यही विषयमा भयो ।
सन २००५ मा ।हहह लाईर् मञ्जुरी दिइएको थियो तर रुढीवादी संगठनहरूको विरोधका कारण पछि उक्त स्वीकृति फिर्ता लिइएको थियो । सन् २००६ मा इन्टरनेट नियमकहरूले पोर्नग्राफी सामग्रीका लागि अलग्गै ।हहह वा डट टि्रपल एक्स डोमेन सुरु गर्ने विवादास्पद योजना खारेज गरेको थियो । आइज्यानका अनुसार यो विषयलाईर् लिएर चिन्तित थियो कि उसलाईर् पोर्नग्राफी साइनको सामग्रीमाथि नजर राख्नका लागि भनिनेछ जुन उसको भूमिका होइन ।
फेब्रुअरी २०१० मा अमेरिकामा जजहरूको ज्यानलले भन्यो कि ।हहह डोमेनलाईर् मञ्जुरी नदिएर आइज्यानले गल्ती गरेको छ । आइज्यानले उक्त निर्णय स्वीकार गर्दै यस विषयमा छलफल सुरु गर्‍यो र अब यसलाईर् स्वीकृति प्रदान गरेको छ । एजेन्सी ।
विश्वमा यस्तो कुनै वस्तु छैन, जुन मायाको पूरक बन्न सकोस् । सायद यसै कारण अकुत धनसम्पत्ति र इज्जतले पनि मायाको चाहनालाईर् कम गर्दैन, बरु अझ बढाउाछ । धनी बन्ने चक्करमा व्यक्तिविशेष पहिले पैसालाईर् प्राथमिकता दिन्छन ।
तर जब पैसाको वषर्ा हुन थाल्छ अनि उनीहरूलाईर् मायाको कमीले पिरोल्न थाल्छ । एउटा अध्ययनले के खुलासा गरेको छ भने विश्वका धनाढय व्यक्तिहरूमा रहेको पीडा भलै नदेखियोस, तर वास्तविकता के हो भने अत्यधिक धनसम्पत्ति भए पनि उनीहरू मनले खुसी छैनन । ‘खुसी एवं धनका विविधाहरू’ शीर्षमा जारी यो अध्ययन बोस्टन कलेजको वेल्थ एन्ड फिलान्थ्रोपी सेन्टरले गरेको हो । सेन्टरका अनुसार बढी पैसा भएकाहरू बढी बेचैन छन । उनीहरूलाईर् काम गर्नमन लाग्दैन । प्रेम पाउने चक्करमा उनीहरूको घरसमेत प्रभावित हुन्छ ।
यौनलाईर् लिएर मरिहत्ते गर्ने बानी छ, यौनेच्छा सामान्यभन्दा धेरै बढी छ भने यसलाईर् मनोविकारको श्रेणीमा सामेल गरिनेछ । अमेरिकी मनोविज्ञान संघका तर्फबाट प्रकाशित पुस्तिकामा योसाग सम्बन्धित चर्चा प्रकाशित गरिएको छ । अत्यधिक यौनेच्छाको विषय त्यो समय सबैभन्दा बढी चर्चामा आयो, जब टाईगर उड्स र रसेल ब्रान्डले यो स्थितिका लागि उपचारको माग गरेका थिए । उड्सले आफनी श्रीमती रसेललाईर् धोका दिएको र धेरै युवतीसाग सम्बन्ध राखेको स्वीकार गरेपछि सन २०१० मा उड्सले ६ महिनासम्म अति यौनेच्छा हटाउन उपचार गराएका थिए । बिरटेनको स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पनि यौनेच्छासाग सम्बन्धित विकारका लागि एउटा प्रारम्भिक परियोजना सुरु गर्न थालिएको छ ।
आकर्षण गर्न फेशबुकमा महिलाहरूले फोटो
हालै फेशबुक माथी गरिएको एक शोधमा महिलाहरूले फेसबुकमा धेरै फोटोहरू राख्ने गरेको तथ्य फेलापरेको छ । महिलाहरू यस प्रकारको सामाजिक नेटवर्किङ्ग वेबसाइटहरूमा फोटो राखेर मानिसहरूलाईर् आफूतिर आकषिर्त गर्न गरेको समेत देखिएको छ । बफेलो विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरूका अनुसार मानिसहरू महिलाहरू राम्रो तस्विर हेरेपछि आकर्सित हुने भएकोले महिलाहरूले बढी फोटो राख्ने गरेको हो । शोधकर्ताहरूका अनुसार यस्ता महिलाहरूमा आत्मबिश्वासको कमी समेत हुने गरेको छ । यसक कारण उनीहरूले आˆनो आत्मबिश्वास बढाउन पनि यस्तो सामाजिक नेटवकिङ्ग वेबसाइटहरूमा फोटोहरू राख्ने गर्दछन ।
बादरको मुख भएको पाठो
बर्दिवास । महोत्तरी जिल्लाको बेलगाछी-९ का किसान दिलीप महतोको बाख्राले बानररुपको अचम्मको पाठो जन्माएपछि उनको घरमा सो पाठो हेर्नेहरुको घुइाचो लागेको छ । महतोको बाख्राले पहिलो बेतमै बानररुपको पाठो जन्माएपछि त्यो अस्वाभाविक पाठो हेर्न हिजैदेखि बेलगाछी, रामनगर, गौशालालगायतका वरिपरिका गाउाबाट मानिसको धुइरो लागेको हो ।
नाक नभएको र एउटा मात्रै आाखा भएको नवजात पाठोले आमाको दूध चुसिरहेको सो पाठो हेरेर फर्केका एक युवकले बताए । यता पशु स्वास्थ्यविज्ञहरुले भने बाख्राले गर्भावस्थामा राम्रो रेखदेख र पोषणयुक्त खानेकुरा नपाएकाले गर्भको बच्चा राम्रोसाग विकास हुन नसक्दा अस्वाभाविक रुपमा जन्मेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
एउटा माछाको मूल्य २ करोड ८८ लाख रुपैया
टोकियो । जापानको राजधानी टोकियोमा एउटा माछा झण्डै तीन करोड रुपैयाामा बिक्री भएको छ । नयाा वर्षको अवसरमा टोकियोमा प्रदर्शनीमा राखिएको ३ सय ४२ किलोग्रामको माछा तीन करोड २४ लाख ऐन अर्थात दुई करोड अठासी लाख नेपाली रुपैयाामा लिलाम भएको हो । एउटा माछा सबैभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भएर विश्व रेकर्डकायम भएको छ । लिलामीका लागि पााच सय वटा माछा प्रदर्शनीमा राखिएकोमा नीलो पखेटा भएको सो माछा टोकियो तथा हङक्कङमा होटल सञ्चालन गरेका व्यक्तिहरुले संयुक्त रुपमा खरिद गरेका हुन । सो माछा उत्तरी होल्काइदो टापुको सामुदि्रक क्षेत्रबाट पक्रेर ल्याइएको थियो ।
बादरले लखपति बनाइदियो
सुर्खेत । ‘बादरको हातमा नरिवल’ भन्ने नेपाली उखानलाईर् चुनौती दिादै एउटा बाादरले एकजना सामान्य व्यक्तिलाईर् लखपति बनाइदिएको छ । पर्सा जिल्लाको पोखरिया थाना गाउा विकास समितिका ६० वषर्ीय वृद्ध अर्जान चौधरीलाईर् बाादरले आˆनो कमाइबाट बुटवलमा १० कठ्ठा जग्गाको मालिक बनाइदिएको हो ।
विगत २५ वर्षदेखि आˆनो घरमा पालिएको बाादरलाईर् लिएर सुर्खेत आएका चौधरीले बाादरले चटक देखाए वापत संकलित रकमले जग्गा मालिक बनेका हुन । उनले सुर्खेतमा पनि हजारौा रूपैयाा सङ्कलन गरिसकेका छन । उनको बाादर पैसा नदिएसम्म ढोकामै कुरेर बस्ने र पैसा दिएपछि हाास्दै अर्को पसलमा पुग्ने गर्दछ । बाादरको यस्ता क्रियाकलाप हेर्नका लागि मानिसको निकै भीडसमेत लाग्ने गरेको छ । यसअघि कुनै व्यक्ति सहयोग माग्न आउादा रिसाउने पसलेहरू पनि उक्त बादरलाई बिना सङ्कोच पैसा दिने गर्दछन । नेपालको पूर्वमेचीदेखि पश्चिममहाकालीसम्म आफू बाादरका साथ घुमिसकेको भन्दै बाादर मालिक चौधरीले यसक्रममा हालसम्म १० वटा यस्ता बादर मरिसकेको बताए ।
मानव शरीरमा पसिना आउनु प्राकृतिक प्रकृया हो । धेरै गर्मी भएमा वा द्रुत गतीमा काम गर्दा प्रायः पसिना आउने गर्दछ । अत्याधिक पसिनाले वास्तबमै समस्या ल्याउाछ । तर सिमित पसिनाले फाइदा पनि गर्ने गरेको छ, विशेषगरी महिलाहरूलाईर् Û आश्चर्यको कुरा के छ भने केही देशहरूमा विपरित लिङ्गी पुरुष साथीलाईर् आफूतिर आकषिर्त गर्न युवतीहरूले पसिनाको सहयता लिने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ अंकमाल गर्दा वा केही काम गरेपछि युवतीको शरीरमा देखिने दानेदार पसिना वा पसिनाको धारोले उनीहरूको सुन्दरतालाईर् अझै बढाउने र पुरुषहरूमा यौन भावना पैदा गर्ने न्यूजविर्डटकम अनलाईन सस्करणले जनाएको छ । हाम्रो शरीरमा रहेको मेराक्राइन ग्ल्याण्डसहरूको कारण नुनिलो तरल पदार्थ पसिनाको रूपमा निस्कासन हुने र यसले शरीरको तापक्रम सन्तुलनमा ठूलो भूमिका खेल्ने अनुसन्धानमा संलग्न अनुसन्धानकर्मीहरूले बताएका छन् । कुनै किसिमको गन्ध नहुने यस्तो पसिनामा प्रोटिन, बोसो, अमिनो एसिडलगायत फेरोमोन्स रहने उनीहरूले जनाए । वैज्ञानिकहरूका अनुसार यसले एक पृथक किसिमको बास्ना पैदा गरी पुरुषहरूलाईर् आकषिर्त गर्दछ ।
पसिनाबिना व्याक्टेरिया बाच्न नसक्ने हुनाले छालामा जब व्याक्टेरियाले काम गर्दछ, तब पसिना नराम्रो गन्हाउने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । हाम्रो शरीरले अत्याधिक गर्मी समयमा दिनको १२ लिटरसम्म पसिना निकाल्ने तर त्यसै अनुरूपमा पानी पिइएन भने डिहाइड्रेसन समस्याले सताउने छ । ध्यान रहोस, कतै तपाईंलाईर् पनि कोही युवतीले पसिनामार्फत् आकषिर्त गरिरहेकी त छैन ?
महिलाको भित्रीवस्त्रले व्यक्तित्वको आभाष
हामी आˆनो अद्योवस्त्र -भित्री कपडा)हरूका लागि जसरी रङ्ग छनोट गर्दछौ त्यसबाट हाम्रो व्यक्तित्वको आभाष हुन सक्दछ । अद्योवस्त्रको रङ्गले तपाइर्ं कस्तो प्रकारको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रदर्शन गर्दछ । तपाइर्ंको स्वभाव कस्तो छ र तपाइर्ं के मन पराउनु हुन्छ जस्ता कुरा अद्योवस्त्रबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । यति मात्र होइन अद्योवस्त्रको रङ्गले तपाइर्ं कुन प्रकारको प्रेमी हुनुहुन्छ भन्ने कुराको रहस्य समेत खोल्दछ । विख्यात मनोबैज्ञानिक डांना डाउसनले आˆनो शोध रिपोर्टका अद्योवस्त्रको रङ्ग र व्यक्ति, रुचीहरू र त्यसमा असर विषयक जानकारी दिएका छन ।
रातो रङ्गः यदि तपाइर्ं रातो रङ्गको ब्रा लगाउन मन पराउनु हुन्छ भने यसबाट यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि तपाई निकै कम लजालु हुनुहुन्छ । यस्ता मानिस उत्साही हुन्छन र नेतृत्व गर्न क्षमता राख्दछन ।
गुलावी रङ्गः यदि तपाइर्ं गुलावी रङ्गको अद्योवस्त्र लगाउनु हुन्छ भने यसको अर्थ हो कि तपाइर्ं नेतृत्व गर्न हडबडाउनु हुन्छ र तपाइर्ं आˆनो साथीले नै सबै निर्णय लेओस भन्ने चाहनु हुन्छ । यसप्रकारको रङ्गको अद्योवस्त्र लगाउने महिलाहरू रोमान्टिक हुन्छन । उनीहरूमा मातृत्वको भावना पनि निकै प्रवल र बढी हुने गर्दछ ।
सेतो रङ्गः सेतो रङ्गको अद्योवस्त्र लगाउने व्यक्ति सबै जिज्ञासु र केही जान्न चाहने स्वभावको हुने गर्दछ । कालो रङ्गः कालो रङ्गको अद्योवस्त्र लगाउने महिलाहरू एकांकी हुन्छन र मानसिक रूपले निकै सक्षम पनि । यस्ता महिलाहरू अति उत्साही हुन्छन एजेन्सी
गर्भावस्थामा दुखाई कम गराउादा छोरा नपुसंक
लण्डन । गर्भती महिलाहरूले दुखाई कम गर्न औषधि खाएमा त्यसले गर्भमा रहेका छोरामा बाझोपनको खतरा रहने गर्दछ । शोधकर्ताहरूका अनुसार प्यारासिटामोल, एस्पि्रन र आइब्रोफिन जस्ता औषधि लामो समय सेवन गरेको खण्डमा गर्भमा रहेको छोराको प्रजनन अंगको विकासमा हानी पुर्‍याउन सक्दछ । हृयुमन रिप्रोडक्सन जर्नका अनुसार करिब ५० प्रतिशत महिलाहरू गर्भावस्थाका क्रममा सामान्यतः टाउको दुख्ने समस्याबाट मुक्ति पाउनका लागि दुखाई कम गर्न औषधि सेवन गर्दछ ।
समाचारपत्र डेली मेलका अनुसार यस्ता औषधिहरूको प्रयोगबाट छोरामा बन्ने शुक्राणुहरूको गुणक्षमता प्रभावित हुन सक्दछ र जीवनको अन्तिम दिनहरूमा उनीहरूमा वृषण क्यान्सरको खतरा समेत रहने गर्दछ । बैज्ञानिकहरूका अनुसार पछिल्ला केही समयमा पुरुषमा हुने प्रजनन सम्बन्धी विकृतिहरूको मुख्य कारण दुखाई कम गर्न औषधि देखिएको छ । यसका साथै भ्रुणको हर्मन असन्तुलनसागको सम्पर्कमा रहनाले पनि विकृतिहरू हुने गर्दछ ।
अध्ययनका अनुसार गर्भावस्थाका क्रममा कुनै पनि समय एकभन्दा बढी प्रकारको दुखाई कम गर्न औषधि लिने महिलाहरूका छोरामा यो खतरा रहने गर्दछ । चारदेखि छ महिनाको गर्भावस्थाका क्रममा दुखाई कम गर्न औषधि सेवन गर्न सबैभन्दा बढी हानिकारक हुने गर्दछ । यस क्रममा केवल एउटा दुखाई कम गर्न औषधि लिदा पनि यो औषधि सेवन गर्न महिलाको बच्चाको तुलनामा औषधि लिने महिलाका छोरामा यो खतरा दुई गुणा बढी रहने गर्दछ ।
प्यारासिटामोलले यो खतरा दुई गुणा बढाउने गर्दछ जवकि एस्पि्रन वा आइब्रोफिनले चार गुणा बढाउछ । अध्ययनका अनुसार चारदेखि छ महिनाको गर्भावस्थाका क्रममा एक साथ दुई दुखाई कम गर्न औषधि लिदा खतराको मात्रा १६ गुणासम्म बढछ । कोपनहेगनका रिग्स हस्पिटलका वरिष्ठ बैज्ञानिक तथा अध्ययनकर्ता हेनरिक लेर्फ भन्छन, दुखाई कम गर्न औषधिले भ्रुणमा हर्मनको प्रवेश रोक्दछ । एजेन्सी
रक्तचाप मा लसुन फाइदाजनक
पूर्वीय मुलुकहरूमा लसुन मसलाको रूपमा खाने गरिन्छ । तर कतिपय समुदायमा लसुन खान हुन्न भन्ने परम्परागत चलन अझै रहेको छ । लसुन खाएपछि मुखमा त्यसको गन्ध आइरहने सम्भावना भएकोले पश्चिमका केही देशमा लसुन मन नपराउनेहरू छन् । लसुन मन पराउने वा मन नपराउने कुराहरू आˆनो ठाउामा छ तर लसुन स्वास्थ्यको लागि लाभदायक रहेको कुरा वैज्ञानिकहरूले बताउादै आएका छन् । यही आधारमा केही चिकित्सकहरूले दिनको एक केस्रा लसुन खाने सल्लाह पनि दिने गर्छन् । हालै गरिएको एक अनुसन्धानमा लसुन रक्तचाप -ब्लड प्रेसर) को उपचारको लागि उपयोगी हुने पत्ता लागेको छ । अस्ट्रेलियाका चिकित्सकहरूले ५० जना यस्ता बिरामीहरू जम्मा गरे जसमा औषधि गरेपछि पनि रक्तचाप उच्च रहेको थियो । यिनीहरूमध्ये केहीलाईर् औषधीको साथै हरेक दिन चार केस्रा लसुन पनि खान दिइयो । परिणाम यो निस्कियो कि लसुन खाने बिरामीहरूको लसुन नखाने बिरामीहरूको भन्दा रक्तचाप कम भयो । योसम्बन्धी अनुसन्धान ’boutको जानकारी एक पत्रिका मटुरिटासमा प्रकाशित भएको छ । लसुन ब्लडप्रेसरको रोगीलाईर् फाइदाजनक छ भन्ने कुरा पहिले-पहिले पनि भन्ने गरिन्थ्यो । लसुनले रगत पातलो गर्दछ साथै कोलेस्ट्रोल पनि घटाउादछ । तर यसको प्रयोग औषधिको रूपमा गर्दा चिकित्सकको सल्लाह लिनु जरुरी छ । साथै अरु औषधिको प्रयोग छोडेर यसलाईर् मात्र औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने वा भर पर्ने पनि हुादैन । साथसाथै लसुन धेरै खायो भने पनि शरीरमा समस्याहरू देखापर्छन् । विज्ञहरूले लसुनको ’boutमा अझै बढी अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको पनि बताएका छन् किनकि अस्ट्रेलियामा गरिएको उक्त अनुसन्धान सानो समूहमा मात्र सीमित रहेको छ । जेहोस् परम्परागत रूपमा हाम्रो भान्सामा मसलाको रूपमा रहेको लसुन लाभदायक रहेको कुरामा भने शंका छैन ।
५ वषर्य बालक ४ वर्षदेखि केही नखाई जिवित
लण्डन । तपाईंलाई सुन्दा र पढदा पनि अचम्म लाग्न सक्छ । आइसक्रिम, चकलेटलगायत खाने उमेरमा ५ वषर्ीया बालक यस्ता सबै चीजबाट डराउने गर्दछन । उनी एक दुर्लब बिरामीबाट ग्रसित बालक हुन । यही दुर्लब बिरामीका कारण चार वर्षदेखि केही नखाईकन उनी बााचिरहेका छन् । उनी हुन एसिड रिफलक्स नामको रोगबाट ग्रसित ५ वषर्ीय बालक डेनियल हैरिसन । डेनियलले कुनै पनि चीज खान सक्दैनन । केवल एउटा नलीको माध्यमबाट शरिरमा पौष्टिक पदार्थ पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइएको छ । एसिड रिफलक्सका कारण खाने नली क्षतिग्रस्त छ । भोजन पचाउने एसिड नलीमा पनि क्षति पुगेको छ । जसका कारण उसले कुनै पनि चीज खान सक्दैनन । करीब एक वर्षको उमेरदेखि हैरिसन यस रोगबाट पीडित बनेका हुन । त्यसै समयदेखि उनी कुनै पनि चिज खानाका लागि डराउने गर्दछ । त्यही बानी अहिलेसम्म उसलाई निरन्तर रही रहेको छ । नााटिंघम निवासी उनको मातापिता केविन र कैथरीन बच्चाको उपचारका लागि पानी जसरी नै पैसा बगाएपनि उनको उपचार हुन नसकेको बताउाछन् । हैरिसनको यसप्रकारको विरामीको कुनै उपचार नभएको विशेषज्ञहरुले बताउने गरेको उनका माता-पिता भन्छन् । हैरिसनका बुवा केविनलाई अझै पनि अस्टि्रयामा रहेको एक अस्पतालबाट आˆनो छोराका उपचार हुनेमा आशावादी छन् । हैरिसनको उपचारका लागि उनका बुवालाई कम्तिमा २० हजार पाउण्डको आवश्यकता पर्दछ । केविन आˆनो छोरा पनि अरुको बच्चाले जस्तै खानेकुरा खाएको हेर्ने सपना छ । जसका लागि सबै कुरा गर्न आफू पछि नपर्ने केविनको भनाई छ ।
दृष्टिविहीन क्रिकेट कमेन्टेटर
हरारे । देख्न सक्ने व्यक्तिले कुनै पनि खेलको कमेन्टि्र गरेको हामीले देखेका छौं । सुनेका छौं । तर, दृष्टिविहीन व्यक्तिले पनि खेलको कमेन्टि्र गरेको सुन्दा, पढदा हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर, यस्तै एक व्यक्तिले क्रिकेट खेलको कमेन्टि्र गर्दै आइरहेका छन् । उनी हुन – जिम्वावेका डीन डू प्लेसी । दृष्टिविहीन रेडियो कमेन्टेटर डीनले मैदानमा आउने बल र बल्लेबाजीको आवाजबाट मैदानमा के भइरहेको भनेर कमेन्टि्र गर्ने गर्दछ । बल कुन दिशा तर्फगइरहेको छ, चौका प्रहार भएको छ कि छक्का प्रहार भएको छ भनेर उनले स्रोताहरुलाई सुनाउने गर्दछ । उनको कमेन्टि्रमा अहिलेसम्म कुनै पनि गल्ती नभेटिएको सुन्ने स्रोता र दर्शकहरु बताउाछन् । ब्याड्स म्यानले गर्ने व्याटिङको आवजबाट नै डीनले बल जाने दुरी ठम्याउने गर्दछ । उनलाई भगवानले आाखा नदिए पनि उनको सुन्ने क्षमताको भने कुनै नजरअन्दाज गर्नलगाउन सकिादैन । व्याटिङको आवजबाट नै उनले त्यसको आसपासका गतिविधि सुनेर कमेन्टेटर गर्छ । उसको कमेन्टि्र सुन्ने स्रोताहरुले उनी दृष्टिविहीन छ भन्ने कुराको नजर अन्दाज नै लगाउन सक्दैनन । उनको कमेन्टि्र पनि स्पष्ट छ । डीनको यत्तिसम्मको संवेदनशील छ कि उसले मैदानमा खेलाडीहरुले गरेको स्लेजिंग र आपसी कुराकानी’bout पनि स्रोताहरु माझ पुर्‍याउने गर्छन । उनले खेल हेर्न आएका दर्शकको उत्सुक्ताबाट पनि खेलको गतिविधि’bout अन्दाज लगाउने गर्छन् । जिम्बाबे क्रिकेट टीमका सदस्य तथा दर्शहरु उनको यसप्रकारको चमत्कारी देखेर दंग पर्दछन् ।
कुकुर पनि चुरोटको कुलतमा
मान्छे, वनमान्छे र बाादरले मात्र होइन अब कुकुरले पनि चुरोट सल्काउन थालेको छ । चीनको हुबेई प्रान्तको बुचाङनिवासी पेसाले मान्छेको काम गर्ने २३ वषर्ीय जेङ जिम्वाङले पालेको कालो कुकुर ‘ब्ल्याकी’ ले एक/दुईवटा होइन, दिनमा सिंगै एक बट्टा चुरोट पिउन थालेको छ । आˆनो कुकुरलाईर्र् चुरोटको अम्मली बनाउने जोङका अनुसार, सुरुमा उक्त कुकुरले धुवाा नै मन पराउादैनथ्यो, तर उनले नाकैमा पर्नेगरी चुरोटको धुवाा फाल्न थालेपछि विस्तारै कुकुरले चुरोटको गन्ध मन पराउन थालेको हो । यसैगरी उनले जेङले कुकुरलाईर्र् चुरोट सल्काउन सिकाएका हुन् । उनले मीठो खानेकुरा ख्वाउने लोभ देखाएर चुरोट पिउन सिकाएका थिए ।
परेली झिम्काईबाट थाहा हुन्छ व्यक्तित्वको रहस्य
भनिन्छ आाखा Åदयको ऐना हो । कुनै पनि व्यक्तिको Åदयको हाल उसका आाखाले बताएको हुन्छ । सााच्ची भन्ने हो भने जसले आाखालाईर्र् पढ्न जान्दछन् । उसले कसैको पनि Åदयको हाल सजिलैसाग सम्झन सक्छन् । आाखाको भाषा पढ्न त धेरैले जानेका हुन्छन् तर तपाइर्ं त्यस्ता कति जना मानिसलाईर्र् जान्नुहुन्छ जो आाखाका परेला झिम्काउने तरिकाबाट उसको स्वभावलाईर्र् बताउन सक्छन् । तर ज्योतिष विज्ञानमा यो पनि सम्भव छ । आउनोस् हामीले पनि जानौा आाखाका परेला झिम्काइबाट उसको व्यक्तित्वको रहस्य -१) पााच सेकेण्डमा एक पटक परेला झिम्काउने व्यक्ति आˆनो जीवनबाट दुखित, वैभव र समृद्धिहीन हुन्छन् । -२) दश सेकेण्डमा परेला झिम्काउने मानिस अर्को व्यक्तिमा आश्रति रहने स्वभावका हुन्छन् र यिनीहरू आˆनो काम अरुबाट गराएर आफूलाईर्र् खुशी अनुभव गर्छ, -३) पन्ध्र सेकेण्डमा परेला झिम्काउनेहरू छिटो निर्णय लिन सक्ने र चतुर हुन्छन्, -४) बीस सेकेण्डमा एक चोटी परेला झिम्काउने व्यक्तिहरू स्थिर बुद्धि भएका र प्रभावशाली हुन्छन्, -५) पच्चीस सेकेण्डमा परेला झिम्काउनेहरू आफाैमा एक अद्भूत आकर्षण भएका हुन्छन् । यिनीहरूमा सम्मोहित गर्ने क्षमता हुन्छ ।
लामखुट्टेले झण्डै लियो ज्यान
लामखुट्टेले मानिसलाईर्र् दुःख दिनु कुनै नयाा कुरा त होइन । मानिसको निद्रा हराम गरेर होस् वा विभिन्न खाले रोग सारिदिएर लामखुट्टेले मानिसलाईर्र् सताउनुसम्म सताउछ तर यहाा समेट्न खोजिएको प्रसङ्ग लामखुट्टेसाग सम्बन्ध भए पनि अलिक छुट्टै छ । सन्दर्भ ताइवानको हो । त्यहााको सरकारी टेलिभिजनमा कार्यरत एकजना समाचारवाचिकाले लामखुट्टेकै कारण झण्डै ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । गएको जुलाईर्र् १९ तारिखको सााझ हुवाङ्ग नामकी ती समाचारवाचिका जसै आˆनो नियमित कार्यसम्पादनका सिलसिलामा सायंकालीन समाचार पढ्दै थिइन्, स्टुडियो भित्रै उनको वरिपरि आएर एउटा लामखुट्टे घुम्न थाल्यो । हुवाङ्गले स्वभावतः लामखुट्टेको कुनै पर्वाह नगरी समाचारवाचन प्रक्रियालाईर्र् अघि बढाइरहिन् । अचानक समाचार पढ्दा-पढ्दै त्यो लामखुट्टे हुवाङ्गको मुखभित्र स्वाट्टै छिर्‍यो । प्रत्यक्ष प्रशारण भइरहकै बेला हुवाङ्ग स्वाा-स्वाा गर्न थालिन् र स्टुडियोमै ढलिन् । यो दृश्य आमटेलिभिजनका दर्शकहरूले प्रत्यक्ष देखिरहेका थिए । टेलिभिजन कार्यालयमा हाहाकार मच्चियो, हुवाङ्गलाईर्र् तत्काल अस्पताल लगियो र अर्को समाचारवाचकमार्फत् समाचार प्रसारण कार्यलाईर्र् निरन्तरता दिइयो । भएछ के भने त्यो लामखुट्टे सोझै हुवाङ्गको फोक्सोमा पुगेछ र उनको स्वास-प्रश्वास प्रक्रियामै त्यसबाट गम्भीर असर पुगेछ । दुई दिनको अस्पताल बसाइपछि हुवाङ्ग घर फर्किइन् । सञ्चारकर्मीसागको प्रतिक्रियामा उनले भनिन्- त्यो लामखुट्टे झण्डै मेरो मृत्यु बनेको थियो ।
कुखुरा दौड प्रतियोगिता
तपाईंले मानिसको दौड प्रतियोगिता देख्दै र सुन्दै आउनु भएको छ । अझ यसबाहेक घोडा दौड प्रतियोगिता पनि देख्दै-सुन्दै आउनु भएको छ तर के तपाईंले कहिल्यै कुखुरा दौड प्रतियोगिता’bout सुन्नु भएको छ ? सुन्नु भएको छैन- थाहा पाई राख्नुहोस् डेट्रोइट भन्ने ठाउाको ग्रामीण क्षेत्रमा वर्षेनि कुखुरा दौड प्रतियोगिता आयोजना गरिन्छ । प्रत्येक वर्ष जुलाईर्र् १५ मा आयोजना गरिने कुखुरा दौड प्रतियोगता हेर्न हजारौाको संख्यामा स्थानीयवासी समेत एकत्रित हुादा रहेछन् । यस पटक भने त्यहाा आयोजित सो प्रतियोगितामा दुई सयवटा भालेलाईर्र् सहभागी गराइएको थियो । समाचारअनुसार प्रतिस्पर्धीमध्ये अथेना नामको एउटा भालेले तीन मिनेटमै दौड गन्तव्य विन्दुका रूपमा कोरिएको निशाना छोएर प्रथम भएको थियो । यसरी प्रतियोगितामा प्रथम हुने कुखुराका धनीलाईर्र् निश्चित रकमका साथ पुरस्कृत गर्ने प्रचलन रहेको बताइएको छ । दौड प्रतियोगिता जित्ने अथेना नामको सो भाले एक वर्ष उमेरको भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
सर्चइन्जिनको माध्यमबाट नैतिकताको पाठ
इन्टरनेटमा कतिपय यस्ता सर्चइन्जिन सुरु गरिएको छ, जसले मानिसलाईर्र् नैतिक शिक्षाको पाठ पढाइरहेको छ, यी सर्चइन्जिनहरू यसरी तयार गरिएका छन् कि इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरूलाईर्र् लोभ, मद्यपान र पोर्नग्राफीदेखि टाढा राख्न सकियोस् । इमहलाल नामको एउटा सर्चइन्जिनमा तपाईले अल्कोहल लेखेर सर्च गर्नु भयो भने त्यहाा यस्तो साइट खुल्नेछ जसमा रक्सीका विषयमा मुस्लिम धर्ममा उल्लेख गरिएको हानी र सोचको जिकिर उल्लेख हुनेछ । यही पोर्नग्राफी र अन्य नकारात्मक कुराहरूका विषयमा पनि यस्तै जानकारी प्राप्त हुने गर्दछ । इन्टरनेटमा काम गरिरहादा आˆनो चरित्र बिग्रनबाट बचाउन यी सर्चइन्जिनमा तपाईलाईर्र् पनि स्वागत छ । इसाईहरूका लागि यस्तै प्रकारको सर्चइन्जिन छ- सीकफाइन्ड अर्फ । यो सर्चइन्जिनले मात्र साइटहरूलाईर्र् आˆनो खोजीमा समावेश गर्छ । जुन बाइबलमा उल्लेख भएका कुराहरूअनुसार सही छ । यहुदीहरूलाईर्र् नैतिकताको पाठ सिकाउनका लागि जुन सर्चइन्जिन सुरु गरिएको छ त्यसको नाम हो- जेवोगल । यी विशेष सर्चइन्जिनहरूलाईर्र् इसाई, यहुदी र मुस्लिम संगठनहरूले अलग-अलग तयार गरेका हुन् । यसको उद्देश्य इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाईर्र् ती सबै कुरादेखि टाढा राख्नु हो जसले उनीहरूलाईर्र् खराब लत बढाउने गर्दछ । एम्सटर्डमा मुस्लिम समुदायका लागि इमहलाल नामको सर्चइन्जिन निर्माण गर्न रजा सारदेहा भन्छन् -हाम्रो बुझाईमा अन्य सर्चइन्जिनहरू मानिसलाईर्र् भड्कावतर्फ लगिरहेका छन् हामी इन्टरनेटमा खोजको यस्तो माध्याम बनाउन चाहन्छौा ताकि मानिसहरू अश्लील र अनैतिक वेभसाइटहरूदेखि टाढा रहेर पनि आˆनो काम गर्न सकुन् । यो सर्चइन्जिन यस्ता वेभसाइटहरूलाईर्र् फिल्टर गरेर तपाईसामु खोजी गरेको जानकारी प्रस्तुत गर्दछ । जसलाईर्र् नैतिक पहरेदारहरूले चरित्रका लागि हानिकारक मानेका छन् । २१ वषर्ीय कुवेती नागरिक रजाकाअनुसार सर्चइन्जिन पाकिस्तान, इण्डोनेसिया, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अमेरिकाका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले खुब मन पराइरहेका छन् । रजा भन्छन्, हाम्रा प्रयोगकर्ता मात्र मुस्लिम छैनन् । हरेक साता प्राप्त गैरमुस्लिम व्यक्तिले पठाएको इमेल आउाछ । जसमा जसमा यो सुरक्षित सर्चइन्जिनको प्रशंसा गरिएको हुन्छ । मानिसहरू आˆना बालबालिकालाईर्र् यो सर्चइन्जिनको माध्यमबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्न सिकाइरहेका छन् । यस्तो गर्ने उनीहरूमा विश्वास छ कि आˆना बालबालिकाहरू अश्लील वा अनैतिक साइटहरूको जालमा फस्ने छैनन् । यी सर्चइन्जिनहरूका कारण केही नयाा व्यक्ति पनि इन्टरनेटको प्रयोग गर्नका लागि आइरहेका छन् । यद्यपि यी सबै सर्चइन्जिन सफल छन् त्यसो होइन । लोकपि्रय नभएका कारण कयौ सर्चइन्जिनहरू बन्द पनि भइरहेको छ । एजेन्सी
अनौठो ब्रा जुन आपतकालीन अवस्थामा बन्छ सुरक्षा मास्क
यो ब्रा कुनै दुर्घटना वा आपतकालीन स्थितिमा निकै काम लाग्न सक्छ । ’cause त्यस्तो अवस्थामा यसलाईर्र् फेसमास्क जसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सामान्य स्थितिहरूमा यसलाईर्र् आम ब्राझैा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर आवश्यक परेको खण्डमा यो दुई फेस मास्कमा परिवर्तन हुन्छ । एलेना बोडनरले डिजाइन गरेको यो ब्राले आइनोबल अवार्डफर इनवेशनल पुरस्कार प्राप्त गरिसकेको छ । यो पुरस्कार अनौठो प्रकारको खोजी कार्यलाईर् दिइने गरिन्छ । झट्ट सुन्दा अचम्मझै लाग्ने यो ब्रा निकै लाभदायी छ । बोडनरले डिजाइन गरिएको यो ब्राले गत वर्ष आइनोबल पुरस्कार जितेपछि यो निकै चर्चाको शिखरमा रहृयो । तर त्यतिबेला परीक्षणका लागि मात्र बनाइएको थियो । अब यो ब्रा बजारमा पनि उपलब्ध भइसकेको छ । यो ब्रा २९.९५ अमेरिकी डलर किन्न सकिन्छ । यो ब्रा बनाउनुको उद्देश्य आपतकालीन स्थितिमा तत्काल फेसमास्क उपलब्ध गराउनु हो । यो ब्राको डिजाइन यसरी गरिएको छ कि कुनै पनि वाञ्छित स्थितिमा यसलाईर्र् दुई भागमा बााड्न सकिन्छ । यसरी यो ब्रा दुईवटा फेसमास्कमा परिवर्तन हुन्छ । यसको विशेष डिजाइनका कारण यो मुख र नाकमाथि राम्रोसाग बस्छ । अब पुरुषका लागि पनि यस्तै प्रकारको कुनै अनौाठो डिजाइन भएको परिधान अद्योवस्त्र तयार गरिादैछ । एजेन्सी
महिलाका लागि अदृष्य ब्रा’
परफेक्ट फिगर महिलाहरूको सपना हुने गर्दछ । परफेक्ट फिगर बनाउनका लागि उनीहरू एक्सरसाइजन, स्तन प्रत्यारोपण तथा आउट फिड्समा निकै खर्च गर्दछन् । तैपनि उनीहरू आफूले चाहेजस्तो सुन्दरता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । तर अब वैज्ञानिकहरूले महिलाहरूको यो समस्याको समाधान पत्ता लगाएका छन् । उनीहरूले ‘अदृष्य ब्रा’’ बनाउन सफलता प्राप्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यसलाईर्र् छालामा लगाउनुपर्नछ । यसले एउटा सामान्य ब्रालेझैा काम गर्नेछ । तर महिलाहरूले यो ब्रा लगाउनका लागि ५९०० पाउण्ड खर्च गर्नुपर्ने छ । ब्रेस्ट सर्जन फियोना कोर्टका अनुसार कोणको आकारको पलिएस्टरको जाल स्तनको छालामा राखिन्छ र स्तनको सतहको सहयोगमा यसलाईर्र् स्टिच गरेर छातीमा लगाइन्छ । यो ती महिलाहरूका लागि बरदान हो जो रेडियो थेरापी उपचार लिइरहेका छन् । उनीहरूले यो लगाएर आत्मसम्मान र आत्मविश्वास प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एजेन्सी
सोसल मिडियाले अनसोसल बनाउाछ…
सोसल मिडियासाग जोडिएपछि यदि आफू पनि सोसल भएा भन्ने लागेको छ भने त्यो ठूलो भुल हुनेछ । युएस युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरूका अनुसार फेसबुक, ट््वीटर र अन्य सामाजिक सञ्जाल साइटले स्ट्रेसलाईर्र् बढाउाछ र पर्सनल रिलेसनसीपलाईर्र् कमजोर बनाउाछ । यसका कारण अधिकांश युवा इनसोमेनियाजस्ता रोगको शिकार भइरहेका छन् । शोधकर्ताहरूले यसको साइड इफेक्ट जान्नका लागि ८०० विद्यार्थीमा अध्ययन गरेका थिए । विद्यार्थीहरूका अनुसार फेसबुक र ट्वीटर उनीहरूको जीवनमा हावी भएको छ । समाजिक सञ्जाल साइटहरू एउटा नशाजस्तै भइसकेको छ । कैयौा विद्यार्थी फेसबुकमा दिनमा १८ देखि २० घण्टा समय बिताउाछन् । उनीहरू मुस्किलले दिनमा ४ देखि ५ घण्टा निदाउाछन् । जब कुनै बेला उनीहरूलाईर्र् फेसबुक छिर्न अवसर प्राप्त हुादैन त यसले नाशाको काम गर्दछ । उनीहरूको सामाजिक जीवन छैन बराबर हुन्छ । ’cause उनीहरू मानिसहरूसाग भेटघाट गर्नुभन्दा बढी समय वेभसाइटमा समय बिताउन मन पराउाछन् । एजेन्सी
हृयाकरको निसानामा ट्वीटर
संसारभरमा लोकपि्रय सामाजिक सञ्जाल साइट ट्वीटरमा कम्प्युटर हृयाकरहरूले आक्रमण गरेका छन् । हृयाकरको आक्रमणका कारण ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरूले अनावश्यक सन्देशबाट दिक्क हुनु परेको छ । कतिपय व्यक्तिका सन्देश पोर्नग्राफी साइटमा समेत लगिने गरेको छ । ट्वीटरका अनुसार उसले यो समस्या समाधान गरिसकेको छ । समस्या समाधान अघि हजारौा मानिसले कठिनाई सामना गर्नु परेको थियो । कतिपय प्रयोगकर्ताका अनुसार अनावश्यक सन्देशले पोर्नग्राफी साइटमा लगिरहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार ट्वीटरको साइटको सˆटवेयर भरपर्दछ थिएन जसका कारण हृयाकरले निशाना बनाए । ट्वीटरमा उत्पन्न समस्या सामना गर्नेहरूमा बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री गार्ड ब्राउनकी श्रीमती सारा पनि थिएन् । उनले आˆनो ट्वीटरमा सन्देश दिइन् कि उनको पुरानो सन्देश नखोलौा ’cause त्यसबाट समस्या भइरहेको छ । सारा ब्राउनको ट्वीटरपछि कयौा प्रयोगकर्ताले यस प्रकारको समस्या झेल्नु परेको थाहा भयो । हृवाइट हाउसको ट्वीटर साइटले पनि समस्या झेल्नु पर्‍यो । उल्लेखनीय छ हृवाइट हाउसको ट्वीटर साइटलाईर्र् बीस लाख मानिसले फलो गर्ने गर्दछन् । ट्वीटर एउटा यस्तो नेटवर्किङ सेवा हो जहाा तपाईं १४० क्यारेक्टरको सन्देश पठाउन सक्नु हुन्छ । इन्टरनेटमा यो सबैभन्दा लोकपि्रय नेटवर्किङ साइट मानिन्छ । एजेन्सी
इन्टरनेटभन्दा परेवा छिटो
लण्डन । के तपाईं कल्पना गर्न सक्नु हुन्छ, अहिलेको जमानामा परेवाको गति इन्टरनेट ब्रोडब्याण्डको डाउनलोड स्पीडभन्दा तीव्र हुन सक्छ ? हो, यही सत्य हो । यो आश्चर्य गरेर देखाएका छन् बेलायती परेवाहरूले । यसका लागि एउटा रेस नै आयोजना गरियो । यसमा सन्देशबाहक परेवालाईर्र् ग्रामीण इन्टरनेट ब्रोडब्याण्डलाईर्र् पछाडि पारे । बुधबार ब्याकायरस्थित एक र्फममा १० वटा परेवा छोडियो । यी परेवाहरू १२० किलोमिटर टाढा स्केगनैसमा ‘युएसबी किज’ पुग्नु थियो । परेवालाईर्र् छाड्ने समयमा ३ सय एमबीको भिडियो फाइल डाउनलोड गर्न सुरु गरियो । परेवा त आˆनो गन्तव्यमा सवा घण्टामै पुगे तर यो अवधिमा मात्र २४ प्रतिशत फाइल मात्र डाउनलोड भयो । यो फाइल पााच मिनेटमै डाउनलोड भइसक्नुपर्ने थियो । इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसनको बोर्डमा संलग्न ट्रेफ डेविसले यो रेस आयोजना गरेका थिए । उनी देखाउन चाहन्थे कि बेलायतमा एक तिहाई घर अहिले पनि ब्रोडब्याण्ड कनेक्सन लिन सक्दैनन् ।
नया संवेदनशील कृत्रिम छाला
अमेरिकामा वैज्ञानिकहरूले यस्तो कृतिम छाला तयार गरेका छन् कि जुन लाभदायक हुनुका साथै असली छालामाझै संवेदनशील पनि छ । बर्के र स्ड्यान्फोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो नयाा कृत्रिम छालाबाट रोबोर्ट र कृत्रिम हातखुट्टा, बनावट र तापमानमा कुनै प्रकारको अन्तर पहिचान गर्न सकिनेछ । यो शोधसम्बन्धी परिणाम नेचुरल क्याटेरिइलिज्म नाक जर्नलमा प्रकाशित छ । नयाा छालामा दवाब महसुस गर्ने सेन्सर लगाइएको छ । जुन लचिलो रवर्डपट्टीमाथि वा त्यसको भित्र लागेको हुन्छ । सो रबड पट्टीलाईर्र् कृतिम हातखुट्टा वा रोबोटबाट संचालित उपकरणमा लपेट्न सकिन्छ । यो सेन्सर दबावमा कुनै पनि प्रकारको परिवर्तनलाईर्र् विद्युतीय तरङ्गमा बदल्दछ । दुई अमेरिकी विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले दुई तरिकाबाट यसको प्रयोग गरेका छन् । बर्केस्थित क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका वैज्ञानिक अलि जाबी र उनका साथीहरूले रबडको एउटा बलियो पतलो परतमुनि अत्यन्त सूक्ष्म तार बिछाए । यो परत ट्रान्जिस्टर जस्तो हुने गर्दछ । जसबाट विद्युत प्रवाह हुन सक्छ र त्यो सतहमाथिको दबावमा निर्भर रहन्छ । दबाब अधिक भएपछि विद्युत प्रवाहको मात्रा अधिक हुन्छ । दोस्रो चरिकामा स्डयान्फोर्ड विश्वविद्यालयका जेनान बाओ र उनको टीमले रबर्डै पट्टी प्रयोग गरे तर अन्तर केवल यो थियो कि उनले बर्के विश्वविद्यालयको प्रयोगको तुलनामा कम सतह बनाए । प्रोफेसर बाओले बीबीसीसाग भने- हामीले अति सूक्ष्म तारमाथि दबाबमा संवेदनशील पत्र लपेट्ने ठाउामा ट्रान्जिस्टरलाईर्र् नै दबावलाईर्र् बुझ्न सक्ने योग्य बनाइदियौ । स्किन त्यसो त स्ड्यान्फोर्ड विश्वविद्यालयको प्रयोगमा बनेको छाला कम लचिलो छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार उनीहरूको कामलाईर्र् अरु उन्नत बनाउनका लागि राम्रो रबर्ड आवश्यक पर्नेछ । बीबीसी
निष्ठुरी आमाको कर्तुत
आमा भन्ने शब्दले सिर्जना र संरक्षणको अर्थ दिन्छ तर प|mान्सको ग्रामीण इलाकाकी एक महिलाले आफैाले सिर्जना गरेका आठ नवजात शिशुको जन्मिनासाथ घााटी थिचेर हत्या गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि संरक्षण गर्न आमाको पहिचान ध्वस्त पारेकी छिन । हत्याको खुलासा २० वर्षपछि भएको हो । डोमिनिक कोटरेज नामकी पैंतालीस वषर्ीया ती महिलाले आˆना सबै गर्भ लुकाएर बच्चालाई जन्म दिएकी र कसैलाई थाहै नदिई हत्या गरेर जमिनमा गाडेको रहस्य ढिला खुलेको बताइएको छ । प्रहरीले सो स्थानमा आठ वटा नवजात शिशुको कंकाल भेटेपछि नर्सिङ सहयोगीका रूपमा कार्यरत ती महिलामाथि आशंका गरेको थियो । ती नवजात शिशुका कंकाल घरको बगैंचामा गाडिएको अवस्थामा भेटिएको थियो । यसैलाई आधार मानेर प्रहरीले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । सो अनुसन्धानमा खटिएका अभियोकर्ताले ती शिशुमध्ये सबैभन्दा जेठो अर्थात पहिलो सन् १९८९ मा र सबैभन्दा कान्छो सन् २००६ या २००७ तिर जन्मिएको अनुमान गरिएको बताएका छन् । ती महिलालाई केरकारका लागि पिउनेदेखि लिएर आवश्यक सम्पूर्णविधिहरूको प्रयोग गरेपछि अन्ततः उनले आˆनो सो अपराध स्वीकार गरेको सरकारी वकिलले जनाए । गाउामा रहेको उनको घरमा फूल बगैंचामा ती शिशुको शव भेटिएपछि निकै पहिलेदेखि प्रहरीले ती महिलामाथि निगरानी राखेर अनुसन्धान थालेको थियो ।उनले आˆनो सो आपराधिक कर्तुत खुलेपछि ती महिलाका आफन्तले त्यस्तो अपराध ती महिलाबाट भयो होला भन्ने कुनैपनि अनुमान नगरेको भन्दै निकै स्तब्ध बनेको बताइएको छ । उनले हत्या गरेका दुई शिशुको शव बगैंचामा रहेका फूलको बोटको फेदमा गाडिएको अवस्थामा पाइएको र बााकी प्लास्टिकमा पोको पारेको अवर्थामा पाइएको थियो ।समाचारमा जनाइएअनुसार ती महिला करिब १३० किलो तौलकी छिन् । उनले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया त दिएकी छैनन् तर उनलाई केरकारका क्रममा सोध्दा भने आफूलाई बालबालिका मन नपर्ने भएर त्यसो गरेको बताएकी थिइन । ती महिलालाई आजन्म काराबासको सजाया हुने पनि वकिलहरूले जनाएका छन् ।अनुसन्धानका लागि लिईएका उनका पतिलाई भने आफूलाई ती कुनैपनि सन्तानलाई त्यसो गरेको ’boutमा थाहा नभएको बताएपछि प्रहरीले रिहा गरेको छ । प|mान्समा आमाहरूद्धारा आˆनै शिशुको हत्या गरिएका समाचारहरू विगत केही समय यतादेखि निकै नै आउने गरेको समाचारमा जनाईएको छ । गत वर्षपनि प|mान्सको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा एक आमाले आˆना ६ वटा सन्तानको यसैगरी मारेको अभियोगमा थुनामा राखिएको छ ।
न्यूजिल्याण्डमा दुनिया कै पहिलो पुरूष वेश्यालय
काठमाडौा । न्यूजिल्याण्डका पूर्वसांसद पाम क्रउकरीले संसार कै पहिलो पुरूष वेश्यालय खोल्ने तयारीमा लागेका छ । उनका अनुसार यो अन्य वेश्यालय भन्दा निकै भिन्न रहनेछ । यहाा महिलाहरूको ठाउामा पुरूषहरूको सेवा लिन महिलाहरू आउछिन। न्यूजिलैंड हेराल्डका अनुसार यहाा महिलाहरू पिउन मात्र पनि सक्छन, अनि मस्ती वा यौन सम्बन्ध पनि राख्न सक्छन । यस भन्दा बढी के नै बााकी छ त ? पाम क्रउकरीलाई यस ’boutमा एक टिभी कार्यक्रममा प्रश्न गर्दा उनले टिभी यस ’boutमा खुलासा गर्न उचित स्थान नभएको बताएका छन । पामले यसका लागि योजनाहरू तयारी गरिरहेको भएतापनि न्यूजिल्याण्डबासीहरूले यसलाई पचाउन सकिरहेका छैन । मानिसहरूले यस ’boutमा विभिन्न धारणाहरू प्रकट गर्न थालेका छन, जसमा अधिकांश यसबाट सहमत छैनन । यसले गर्दा महिला शक्तीका नाममा अब महिलाले पनि यौनका लागि पुरुषहरूलाई किन्न सक्ने भएको छ ।
आठ वर्षमा प्रेम, नौ वर्षमा बच्चा
काठमाडौा । मलेसियाको एक समाचारपत्रमा प्रकाशित एक खबरले मानिसहरूलाई अचम्ममा पारेका छन् । मलेसियामा एक स्कुल जाने नौ वषर्ीय बालिकाले बच्चा जन्माएकी छिन् । समाचारपत्रका अनुसार उक्त बालिकाको छिमेकमा रहेका एक १४ वषर्ीय बालकसाग प्रेम सम्बन्ध रहेको समेत लेखेका छन् । यस समाचारबाट मलेसियाका वेलफेयर एण्ड केयरिङ सोसाइटीका अध्यक्ष्य फी बून स्तव्ध भएका छन् । उनले यस मामिला अत्यन्त गम्भीर भएको हुनाले उनको क्षेत्रमा रहेका सबै विभागहरूलाई यस’boutमा अनुसन्धान गर्न लगाएका छन् । बूनका अनुसार यति कम उमेरमा राखिएको शारीरिक सम्बन्धलाई कानुनले बलात्कार मान्नुपर्ने राय समेत व्यक्त गरेका छन् । यस अलावा जुन अस्पतालमा उक्त बालिकाले बच्चा जन्माए त्यसलाई पनि यस खबर लुकाएको कारण कारवाही गर्नुपर्ने भने । समाचारका अनुसार आठ वर्षको उमेरमा प्रेम गरेर जन्मेको उक्त बच्चालाई बालिकाको हजुर आमाले पालिरहेको छ । उनै हजुरआमाले एक गैरसरकारी संगठनमार्फत यस खबरलाई पत्रिकामा दिएका थिइन् ।
अपराधको दुनियाामा महिलाहरूको बिगबिगी
काठमाडौा । अपराधको दुनियाामा महिलाहरूको प्रभुत्व बढ्दै गइरहेको तथ्य प्रकाशनमा आएको छ । दुनियाा भरमा महिला गैंगस्टारहरूको संख्या १३२,००० बाट बढेर ६६०,००० पुगेको छ । यस अध्ययनबाट बेलायत तथा अमेरिकामा हुने गरेको संगठित अपराध समूहहरूमा महिलाहरूको साझेदारी २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ । अपराधको क्षेत्रमा महिलाहरूको प्रभुत्वमा वृद्धि देखिए तापनि यिनीहरूले बन्दुकको प्रयोग भने कमै गर्ने गरेका छन् । जेनेभाको एक अन्तरर्राष्ट्रिय अध्ययन संस्थानबाट गरेको अध्यनले महिला गैंगस्टारहरूले अपराधका लागि चक्कु, ढुङ्गा तथा अन्य औजारहरूलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको पाइयो । यस अध्ययनबाट विश्वमा छरिएर रहेका यस्ता समूहहरूको शक्ति देशमा कानुनको रक्षा गर्न बसेको शक्ति बराबरा देखिएको छ । अपराधमा महिलाहरूको वृद्धि देखिए तापनि यिनीहरूले क्रुर अपराध भने कम नै गर्ने गरेका छन् ।